Kutheni ndatshata Intombazana White — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Nanini na emva imifanekiso intsapho yam eendaba zentlalo, iimpendulo zisoloko fun. Eqhelekileyo inkoliso, "Unyana wakho mhle kangaka!"Okanye" Yintoni usapho entle!"Kodwa elinye iimpendulo eqhelekileyo, "Ngaba umfazi wakho ezimhlophe?"Abantu bacela kum ibonisa ngamanye amaxesha kakhulu. Impendulo nguewe. Umfazi wam bayi- Hungarian, IsiTaliyani, nesiPolish-ukuba abantu abaninzi nje ewe, emdala amhlophe. Oku awungeni kwezinye, kodwa ezothusayo okanye ekudanisayo kwabanye. Andiqondi ukuba umntu kufuneka othuka okanye yokuphoxwa imitshato ukutshatana, kodwa nangoku ndifuna ukuthetha kutheni ndatshata ngaphandle "ugqatso yam.
Isigqibo ukutshata nomntu ukusuka nemvelaphi eyahlukileyo uhlanga kwakungekho namnye lobutsha kum. Andizange ndahlala phantsi, wabhala ngaphandle elungileyo nengalunganga uluhlu. Nangona ukuba wenza, into yokuba umfazi wam zange wabona elidume "Martin" iya kuba con kudidi. kodwa enyanisweni, Andizange ndichithe phezu okanye bafune icebo malunga nokuba kuyinto. Ndeyiseka ukuba umfazi kum batshate, nangona wayengekho abamnyama.
Abanye akasoze cinga ukutshata nomntu asinguye nobuzwe efanayo kubo, ngoko ke makhe ndinibalisele ukuba kwakutheni mna.
Ukunyaniseka, ndisoloko kulindeleke ukuba angazeki mfazi omnyama. Ndafumana abafazi zonke ezintle, kodwa amantombazana abamnyama "alukhethayo." yam Kodwa xa ndithe ndafika kwi campus yam kwikholeji 2006, Mna andifuni umfazi konke konke. Ndandifuna nje ukuba akhule ukholo lwam kwaye ufumane imfundo. album yam yokuqala nje uphume, ngoko ke sahlutha kwezinye izinto ukuba bagxininise. Kodwa njengoko ndadibana nabantu esikolweni, indawo sophomore ogama UJessica ngokwenene wabamba ingqalelo wam saba ngabahlobo.
Sabalekela kwi izangqa efanayo saphela ukuya kuhlangana icawa enye, ngoko wabona omnye kakhulu. Kwaye okukhona Ndathi ukwazi kuye, okukhona ndanxulumana kuye. Ngokwenene wayemthanda uYesu yaye le ukukulungela kwabantwana ukwenza nantoni Wabuza. imfesane bakhe kubantu abasweleyo umngeni kum waza waba intliziyo ethobekileyo basabela iLizwi. Kulo nyaka wokuqala, Ndandibukele yakhe kubingelela iiyure ezininzi ixesha ekukhonzeni ecaweni yethu. Phezu kwayo yonke loo, Ndandikuthanda ukuba emjikelezileyo. incoko yethu, nokuba kakhulu okanye abafazazana, kusoloko ahamba lula. Ngoko ekugqibeleni ndaqalisa ukubuza mna, "Ukuba ndinokutshata le ntombazana?"
UJessica akazange kanje ndathemba umfazi wam elizayo khangela, kodwa ngokunyanisekileyo ukuba akuzange akunamsebenzi kum. Musa ngandivi kakubi, Ndandicinga ukuba wayemhle ukususela kwixesha lokuqala endadibana naye. Kwaye akazange ngokuchaseneyo ngokutshata intombazana emhlophe. Mna andizange Andiqondi ukuba. Kodwa njengoko Ndakhulela elukholweni yam nentliziyo yam watshintsha, ngenye waqala ukutshintsha kakhulu. Eyona kukhetha ukuba umfazi wam kuba uThixo, kwaye UJessica. Ngoko wifed yakhe.
Ungaze nakancinane wenza Ndiziva ngathi ndandiqalisa ukuzinza. Oku uziva ngathi ekuzinziseni ngoyaba umfazi uThixo nje ngenxa yohlanga yakhe. Ndandingayithandi ndalixabisa lam ezikhethwa ngokuba umfazi phezu koko ezifunekayo kwi umfazi.
Akukho nto ke ukuba iphosakeleyo ezikhethwa, kodwa kufuneka babe nabo ngesandla evulekileyo. Ndiyazi abanye abantu ngoyaba iqabane enokuba uThixo kuba awangeni ezinye ozenzekelayo kuqala. Ezinye iinketho zethu ngokwenene musa Akukhathaliseki ukuba lukhulu. Ezinye iinketho zethu banokude isidenge, ngoko ke kufuneka ukuba angenise bonke bephela ngokweSibhalo.
Xa wena neqabane lakho phakathi ungquzulwano, ulusu Akukhathaliseki. uhlobo lomzimba iwonga ekuhlaleni kubonakala singabalulekanga. Ufuna ukuba yobuthixo abathobekileyo. Ke umfazi wam mna kuqala ukukhulisa umntwana wethu wokuqala, Ndandingakwazi kuba nombulelo kakhulu kuye. Yena yeyona umama emangalisayo kunye nempembelelo lobuthixo kunyana-yam apho into yokwenza imvelaphi yobuhlanga yakhe. Yinto KULUNGILE ukuba ufuna izinto iqabane, kodwa kufuneka angenise iminqweno yethu ukuba oko uThixo afuna kuthi iqabane. Oko ndifuna nobaluleke kakhulu neqabane uThixo, kwaye yiloo nto kanye ukuba uThixo.
CLL • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:50 pm • impendulo
Lihle ilizwi Uhambo. Umyeni wam White kwaye mna Black yaye ndandisoloko ufumane wabuza oko kwandenza ukukhetha umntu ngaphandle uhlanga yam. Ndisoloko phendula ukuba uThixo wenza ukhetho mna yenza umsebenzi imangalisayo, ngcono kunokuba ndakha into endiyenzileyo ngokwam. UThixo ulungile! Qhubeka wenza into oyenzayo! 116! UYesu kuqala de sibe phantsi komhlaba!
Ericka • EyeNkanga 17, 2013 ngexesha 8:59 mna • impendulo
Enkosi Uhambo ukunyaniseka Lee. Ndiyavuma. Unokuba lukhetho kodwa kufuneka uzibambe ngayo ngesandla evulekileyo ngenxa njengomKristu ukuzibophelela yakho yokuqala kuKristu kunye neqabane lakho kufuneka ukuxhasa lo. ngokulinganayo yolked…
Wadsworth • EyoMqungu 2, 2014 ngexesha 3:52 mna • impendulo
post Uhambo Great.
I nengxaki ukubukela blog yakho ifowuni yam. Amaphepha kubonakala fixed kuphazamisa onokulufumana ngokuskrola ngasekhohlo-ekunene kunye namagama ekupheleni komgca ngalinye ubonakala wonqanyulwa, angabikho screen yam ukuze ngamanye amaxesha andinako ukwenza intsingiselo ezinye izivakalisi. Andiqinisekanga ukuba le ngxaki ngebrawuza yam okanye mhlawumbi ubuchwepheshe phaya le blog yakhe. Nje wayefuna ukuba ziziswe up into nje incase kungenziwa ukusuka ekupheleni kwakho.
Maria • EyoMqungu 10, 2015 ngexesha 8:10 pm • impendulo
Intombi yam othanda umculo wakho. enyanisweni, Mandivume; Ndiyenza nam:). Xa wandazisa kuqala ukubona umculo kunye nezinye esizithandayo, lacris) Ndavuya nje oko ngenxa yempembelelo yakho Yobuthixo nge umculo wakho. Ke mna ndahlala ngandlel siphaphile. Ezibuza ukuba umculo wakho wabonakalisa ubuqhaji yakho. Ukufunda le Ndiqinisekile ukuba ungumfo lobuthixo. Ndithandaza iintsikelelo ezininzi ezininzi wena nomkakho amahle nonyana Inomtsalane. ngabanye ethetha, yaye ngexesha apho kukho ububi obungaka, uhlanga nje ukuba. Enye unethamsanqa ngokwenene ukuba umfazi (Ukuba ngaba indoda) Othanda uYesu ukhonza Yena kanye ecaleni kwakho.
Adam Craven • EyoMqungu 26, 2017 ngexesha 10:24 mna • impendulo
AMEN!!! Andizange ngokwenene ukuqonda ukuba kutheni abanye abantu ngoyaba umfazi uThixo ngenxa nje yokuba bengazange angena kwenye bakukhethayo. Mna udade phantse wabeka ukhetho phambi ulonwabo. Ekugqibeleni Waya ilizwi emangalisayo kaThixo waza wathandaza ngalo waza wathandaza yaye ekugqibeleni wafumana impendulo yakhe kwaye ngoku 2 abatshana kunye uthixo enkulu esoyika umzalwana-in-mthetho!! Wena ze Kufuneka ubeke ukhetho yenu phambi koThixo ngenxa yokuba lonke ixesha umntu ngokusisiseko etshicele ebusweni bukaThixo kunye nokukhethwa kwam phambi kwakho!!
Nahledge • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:52 pm • impendulo
post Dope chameleone!
Michael • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 4:48 mna • impendulo
Alexis • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:54 pm • impendulo
Ukanti ibali engcono uthando ngaphezu ngorhatya.
Daniel Troutman • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:51 pm • impendulo
tam • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:36 pm • impendulo
ZONKE USUKU ibali engcono uthando ngaphezu Twilight.
yena • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 6:23 pm • impendulo
True ngayo :)
Terrell • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:54 pm • impendulo
Carina • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:54 pm • impendulo
Njengoko bukaThixo bukusa, kufuneka silandele. Ndicinga iBhayibheli thina sonke uhlanga enye, kuqala ukususela kuAdam noEva emva koko yonke inzala kaNowa. Oku kungathatha amawaka eminyaka kunye amakhulu kwizizukulwana ukuze ubuyele, kodwa sonke saqala ukusuka kwindawo efanayo. enye uhlanga, ethnicities ezininzi.
Britta • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:55 pm • impendulo
Ndivumelana ngokupheleleyo! Phambi kokuba ndadibana nomyeni wam ndisoloko ezithandwayo achetywe ecocekileyo iintloko ebomvu, kodwa ke wadibana noDavide. Yena a guy enkqayini kunye goatee elide ngokwaneleyo ukuba qhina! Waye / yiyo yonke into uThixo wathembisa ukuba mna ndibe ndafumana indoda, kodwa ukuba ndithe wayefuna nje ngenxa imbonakalo ethile Bendiya kuba baphoswa nto ilungileyo uThixo kum!
david B • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:56 pm • impendulo
Ndiyabulela ngalento. I nzima ulinde kuze kube ngokoqobo, le indlela ukwenza lofefe ngemihla, incwadi cowritten yi Uhambo kunye Jessica!
kaEnana • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:57 pm • impendulo
Ndiyabulela hambo eli nqaku emangalisayo. Ukuze ibe inyani, I kwaba kuhle ndothuka xa ndifumanise malunga ugqatso umfazi wakho. kodwa, Ndiyakholwa ukuba izicwangciso kaThixo ebomini bethu, ukuba uyayithetha oko silindele okanye ufuna. Ngoko ke, eli nqaku liye wandikhuthaza ukuba athandaze yaye ukufumana nezisusa kwam kunene; ke xa umntu onelungelo badlula indlela yam, Xa uThixo evuma, Ndikulungele. Enkosi kwakhona bhuti. Uthando wena ifam lakho kuYesu. inkosi ikusikelele.
uRakeli • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 1:57 pm • impendulo
Wowu. I Ndinombulelo kuba intliziyo yakho ngokuphandle nangokunyanisekileyo ngalo mba, njengokuba mna Ndiqinisekile ukuba ayiqwalaselwa ngokwaneleyo! nomyeni wam ziyafana “uhlanga” kodwa ungabona le impikiswano enye phezu izinto ezidengileyo ezifana omnye umntu badume (hlobo luni lomsebenzi baye), xa benabantwana, into eye ezidlulileyo lwabo, kungakhathaliseki inkabi yebhokhwe baba kuKristu okanye. Ndiyazi enyanisweni ndiza Ndiye nditshatile umyeni wam enoba uhlanga lwakhe, isimo, okanye imvelaphi. uthando lukaThixo ubabalo lugubungela yonke into yaye yenza lonke entsha entle. Ke abafana nawe wathi, Uyazi ukuba kufuneka senze okungakumbi thina ngokwethu. Ndiyabulela kuwe ngenxa yale post!!
paul • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:00 pm • impendulo
Oku kwaba…. ekhulula.
crystal • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:01 pm • impendulo
Eyona intle. Ndiyakuthanda ukuba ekuthethwa ngayo ezikhethwayo zakho ozitshintshileyo xa izinto zakho ozitshintshileyo. UNkulunkulu uyamangalisa, Uye okungcono kakhulu ukuba ngamnye kuthi, kodwa kufuneka aphume endleleni yethu ukuze sikwazi ukubona, ufumana kwaye ziyakholwa. Ndingu mfazi omnyama andimkhathalelanga uhlanga. Umthandazo wam kukuba ukubona abantu ngendlela uThixo uyababona nihambe intando yakhe. Yiyo leyo. Nguye uMenzi wethu, ukuba ngebala, Thina?
deer • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:02 pm • impendulo
blog Great abantu kufuneka ufunde. Mna Lebanese Armenian kunye nomyeni wam umnyama yaye sayihamba kwaye abatyhubela eninzi intlungu kusapho lwam.
Andizange ukuthanda yohlanga. Phambi kokuba wasinda ngase 3 ubuhlobo ezinkulu yohlanga ezahlukeneyo kwaye emva kokuba usindiswa waza wakhulela ubuhlobo bam kunye noKristu kwaba konke malunga ngubani mna “ebizwa” ukuba abe; ngubani uThixo “wakumisa” ukwenzela mna.
Sikhule bekungenjalo kakhulu lukhetho kodwa mfuneko usapho lwam ukuba yendele kwakuloo yohlanga yam kodwa zange Andikhathali; i wayesoloko ingqalelo izimvu abamnyama kunjalo…
Kum bonke ezibaluleke oko ukuthanda kweNkosi kukuba ubomi bam xa umyeni wam, ukuyityhilelwa kwam nam uxolo kwaye onjalo esazi ukuba ndimi emhlabeni yam. Thina nangoku sithandazela iintliziyo usapho lwam ukuba ukuthanjiswa kodwa isiphelo yonke into ebalulekileyo kukuba mna ndikuye ukuthanda kukaThixo kunye endleleni Yakhe kwaye akukho apho enye ndifuna be..I mna ekhuselekileyo nenokhuselo kwi intando yakhe.
Michael • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:03 pm • impendulo
Oku isibonda uhambo enkulu. Zange khe ndivakalelwe nomdla yohlanga yam, kokufika, kodwa njengoko ukhule ngakumbi ukholo lwam kuye kwaba sobala ngakumbi kum ukuba ibala akunjalo ibaluleke kakhulu. Oku kuhlaziya ukufunda yaye ndiyambulela uThixo wamnika ukuba umfazi omkhulu onjalo ukuba kukunceda uqhubeke dumisa. Enkosi nesikunikwayo kwimiyalezo yakho yonke!
baba • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:03 pm • impendulo
Mna nomfazi wam abantu abamhlophe. UNdikhoyo wamtyhala sibe senziwe ukuze umntwana wethu wokuqala. Kuloo nkqubo uyakwazi ukukhetha ofuna. Yinto phantse njengokukhetha ngaphandle injana. Ngenye indlela enye ukhetho ufumana ukuze ngenxa yohlanga. Asinayo ngxaki nayo nayiphi na uhlanga, kunjalo, apho ndivela ukuba babathiye abantu abamnyama. Ngoko ke bakhetha ukuba amkele umntwana omnyama ngenxa yabo kunye nendlela ukuba ziphathwe xa uhamba nabo emva ukubona nomkhulu. I basoloko kwabambana ngokhetho. Ngaba senza into elungileyo? Ngaba thina ukukhusela umntwana wethu kuloo intiyo, okanye ukuba udlala kaThixo ebomini bethu? Thina ke bakhululekile ngokhetho ngoku, ngenxa yokuba phezu, kodwa ucinga ntoni?
DeeDee • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 6:26 pm • impendulo
I afunde iposi yakho… Ndiyavuya abamnyama, kwaye samkelwa abo amhlophe ngabazali bam. Nkqu ijaji ngayo icala luyavutha. Umama nobaba luvo ngenxa yokuba sasihlala kwindawo apho mna enye nabanye abantwana bam ezithatyathwe kusenokwenzeka ukuba ayigqitywanga njengoko wamalathisa ubandlululo zabantu. Oku sekuthethekile, bathembela ngoThixo, yaye akazange wadibana iimeko ezixhalabisayo.
Ndicinga kwaye ndiyakholwa ukuba wena nomfazi wakho wenza ntoni kakhulu usapho lwakho. imeko ngamnye ufana yedwa kwaye uThixo usinika umlinganiselo ubabalo uhambe imizuzwana amancinci kunye enkulu yobomi. ukuba bakhuthazwe! Ngubani owaziyo, mhlawumbi uya kufumana ithuba lokuba basebenzise kwakhona kwaye ukhethe i emnyama (okanye uhlanga) umntwana! UThixo wayesazi iintliziyo zenu ke, yena uyazi ukuba nkqu kule mzuzu.
lilly • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:51 pm • impendulo
Ndiphuma kusapho apho baye abazali bam emhlophe 6 abantwana abamnyama. Ndicinga ukuba unyanisekile kunene kum ngenxa yenu nonke ukubona ngokwenene ukuba aveze ngaphandle uhlanga lwakho ithetha ukuba kufuneka lube nenjongo kakhulu malunga ukuvumela umntwana wakho ukuba inkcubeko yabo, uze uphonononge nasebumnyameni yazo. Ukuba uThixo wambiza ngokwenene ukuba ukulandela ukukhulisa umntwana omnyama, ke kufanele ukuba kube lula ukuba usapho lwakho impembelelo niphume eso sigqibo. nokuba, le mibuzo kufuneka ukuba ucelwe, sesona sigqibo ukuba bamkele kabanzi ngam, okanye umntwana lowo udinga ekhaya? Na ukuba nako konke ngovukelo evela abahlobo kunye nosapho ukuba iza yokwamkela umntwana ngaphandle uhlanga wam? Ngaba ulindele umntwana ukuba wakhulela ngendlela onegunya ukunyanzela ukuba bayeke abo ukuba abe lilungu losapho lwam? Ndiya kushiya isithuba ukuba umntwana wam ukuba abe nako ukubambana ngenxa bangoobani zokuphila phakathi siyibambe? Ingaba uluntu kumisa ngendlela ekholisa ngakumbi umdla kum ukuba umntu omhlophe ukuze amkele phezu iimfuno okwenyaniso lo mntwana? Indlela eyamkelekileyo le nkqubo wokwamkelwa?
Ukwamkela umntwana kuthetha ingqondo shift yonke, kunye amaNgqina efudukela ebonakalayo ukuba bume wena ku akakhethi iimfuno zomntwana wakho. Ubudlelwane kuya kufuneka ukuba zakhiwe nabo uvela ngokwembono ukuba akanakuze usizo ngokupheleleyo (ukuba abamnyama). Siphila kwihlabathi ngokobuhlanga, kwaye kufuneka baziswe njalo nguwe umntwana uphakamisa. Ukuba bakhetha asiyiboni, ke wena ngeendlela ezininzi ngokwenza dlel wena umntwana nesimo. Ukwamkelwa na ngawe ukuya ukuhlangula umntwana abahluphekayo abamnyama. Yinto ngawe kokushukunyiswa ngaphandle yindawo uthando ngokwenene behlala ngaphandle intliziyo ezilungileyo cincile uze umthande ummelwane wakho. Oku akukho malunga nawe, njengoko umntu omhlophe.
Ngeendlela ezininzi ezi zinto nje imibuzo embalwa kufuneka ukuba ekunqandeni. Ukuba ukulungele ukuba banyamezele le yaye lukhulu, ngoko kusebenzisa umntwana untsundu mhlawumbi isigqibo esifanelekileyo. I uthumele inqaku ngezantsi ekuvumela ukuba ukubuza ezi zinto ngendlela nzulu ngokumema uhlanga kwi ingxoxo ze ufumane ukubona adoptees namava abo.
Akukho ibali ngalinye ibali impumelelo yaye ngokufuthi amaxesha abo na amabali ayiphulaphulwa. Mna nethamsanqa kuba ngamava bam kunye nosapho lwam. Ngeendlela ezininzi, Kuba ndinikwe kunye amathuba amaninzi ukuhlola mna ndinawe amathuba amaninzi, kunjalo, Ndiyazi ukuba iza ngexabiso kwaye kufuneka ukuba ushiye isithuba ukuba ochasiweyo malunga.
Kara • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:05 pm • impendulo
haha! “Eyona kukhetha ukuba umfazi wam kuba uThixo, kwaye UJessica. Mna ke wifed naye.” umgca Best kule blog. UThixo Jabulani kunikhokelela umfazi omkhulu. :)
John Evangel • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:08 pm • impendulo
ixesha umfundi Long & umphula-phuli. ixesha commenter okokuqala. Ndiyithanda ngokwenene eli nqaku.
Intsapho yam Nigerian, kwaye utata wam wandithumela isicatshulwa random enye ekuseni e 4 ekuseni esithi “Ukuba ufuna ukutshata, qiniseka umntu wayo ukususela kwisiqalo efanayo wena. Ebuninzini, eli lizwe elifanayo.”
Kanjalo, Ndandingazi ukuba ndithini, kuba andivumeli sixoxa phambi. #Uyafa.
Ndiyazi ukuba ndiya kubathanda nomfazi wam, xa sikulungele, kungakhathaliseki ngebala, imvelaphi yobuhlanga, imiqobo yolwimi, kunye nazo naziphi na ezinye umahluko. Eyona nto ibalulekileyo kum kukuba yena yinxalenye yentsapho yam – kwintsapho kaThixo. Oko konele.
Tilda • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 6:37 pm • impendulo
Hahaha. Abazali Naija ingaba nzima ngomtshato . Kodwa abanye care dont ngubani u batshate
QuentinLawson • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:09 pm • impendulo
abahlobo • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:12 pm • impendulo
Enkosi ngokwabelana Trip intliziyo yakho. Thina sonke efanayo xa kubhunyula isikhumba. UThixo wadala ngalinye ngokulinganayo kwaye zibekeke ngendlela kuyilo yekhethelo. UThixo akusikelele wena nosapho lwakho.
Joshhan • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:12 pm • impendulo
Ayikho into embi ngathi uthi Trip malunga ngokutshata umntu bolunye uhlanga. Into ebalulekileyo kukuba ngubani na wena okanye ndinokutshata bayamthanda uYesu (uphawu 12:30 yesiXhosa) nokuba baya kukuthanda umva kwaye ukuba uyamthanda ngathi uThixo uthanda iBandla. UThixo anisikelele nohambo kunye nosapho lwakho
MichaelJ • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:13 pm • impendulo
Awesome ehlaziywe ngayo iNkosi esoloko itshintsha i “nikhanyiselwe amehlo engqondo yethu” ukulungelelanisa kunye “amehlo ethu”. Sikwimeko kwimingeni, nangona mna andikhange ukutshata kodwa, ngokuba umfazi uThixo oye ube nomnqweno wokukholisa yakhe uMsindisi kubaluleke ngakumbi kunayo nayiphi na phawu olo lwangaphandle enyameni. Siyavuyisana phezu kwakho yonke loo minyaka yaye ngamana uThixo angaqhubeka abanye kusikelela.
JB • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:17 pm • impendulo
Ndiva ukuba uhambo, post esihle.
Virgil • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:17 pm • impendulo
Akwaba angazeki mfazi omnyama!
noNolan • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:18 pm • impendulo
Siyabonga isithuba! Ngokwenene bakhuthazwe blog yakho, waphefumlela ukuba eyami! Enkosi.
OJ • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:25 pm • impendulo
post Nice!! Enkosi
Arthur simuchile • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:25 pm • impendulo
Sonke uyise kodwa ezahlukeneyo oomama efanayo igazi efanayo likaYesu ubaleka kuthi,isikhumba yinto nje,kodwa yintoni ngaphakathi kwethu ebaluleke kakhulu ,wonderfull Mr Trip Lee.may uThixo akusikelele wena nosapho lwakho ukuze benze yakho wonderfull.
deidreBaker • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:29 pm • impendulo
Wowu! Ndandingazi ukuba uzekile kwaye ukuba she is a abafazi emhlophe, njenge abafazi abamnyama kunye nabafazi kaThixo, Halala kwi ukufumana uthando lokwenene! I love you wachaza indlela kutheni utshate umfazi wakho, kwaye ngenene akazange abe kakhulu, kodwa ibali ngani emangalisayo! ukuze kumzalwana wena nomfazi wakho ezithandekayo Jessica, Akwaba guys iminyaka emininzi emininzi! Usikelelke!
Elizabeth • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:31 pm • impendulo
Wena wenze enhle! Mna ufunde inqaku lakho ukuba ayinamsebenzi malunga ibala kodwa into ebalulekileyo yindlela umntu ohamba noThixo Nentliziyo yabo!! Siyabonga ngokwabelana ibali elihle.
Jimmy Sorrells • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:32 pm • impendulo
Loo nto yenza ephelele. Yintoni akwenzi ngqiqo yi ubuhlanga. Ekubeni kukho uhlanga enye kuphela, ukuba esilwela ukuba nxamnye uluntu. Kukho amaqela ahlukeneyo abantu kodwa uhlanga olunye kuphela kodwa oku kubonakala ngathi ingxabano yokulahlekelwa nabantu mna kuxoxwa ngayo nangona inyaniso yayo.
kungu • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:33 pm • impendulo
post Great, uhambo!
JeffreyCravens • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:34 pm • impendulo
“Ndandingayithandi ukuxabisa iinketho wam umfazi phezu izinto ezifunekayo umfazi.”
Loo mazwi profound. Utata lwam luyadlubhuka, unina limhlophe, baye batshata 35 kwiminyaka. Ke eminye iminyaka kurhabaxa kakhulu kodwa embindini lo mingquzulwano, “ibala lesikhumba” kakhulu ngokuqinisekileyo akazange Akukhathaliseki. UYehova uye waba nomusa yaye uthembekile.
uhambo, esi sithuba bula bhuti. Ndingu ngeveki kude sibhiyozela unyaka wam wokuqala umtshato nomfazi uThixo selelo kum imihla imfesane yakhe. Yena kuyenzeka ukuba babe latin, French and Hawaii endilisekileyo. Ngoko ukufunda eli liye kakhulu.
Enkosi kwakhona, Jeff.
Walter • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:34 pm • impendulo
i uvakalelwa bacinge efanayo ngaphandle ibhokisi i mna emnyama i andifuni ukutshata kwisizwe sakowethu andiyi kuba izizathu zam i ndingenjengabanye iintlobo abafazi
Michelle • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:35 pm • impendulo
Siyabonga ngokwabelana kunye yokuphalaza ukukhanya kule. nokuba limhlophe, mnyama, etc kokuba wawuthetha eyona nto ibaluleke ngokwenene. Umoya ubuhlanga wasibambezela ixesha elide kakhulu kwiindawo. Ndiyakholwa ukuba ligqobha ababodwa. inkosi ikusikelele & usapho lwakho okhulayo.
ChevyThompson • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:36 pm • impendulo
efanayo ibali lam. Enkosi 4 ekubekeni
Bachizzle • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:37 pm • impendulo
Ndingayifumana ingcamango, Mna yaseMelika yoTshintshiselwano lweenkobe ( indian) Ndiyabona ukuba nawe wenze uhambo nendlela. Ndifunde e Southern sem. kunye nabantu ucele kum xa uza ukutshata? I asabele “xa ixesha ilungile kwaye i ndinyanisile”. Ndawugcina amehlo am, i bathi “i ndifuna umfazi uThixo oya kuba njalo uthando noYesu ukuba ndiza imbeko igama lakhe”. Kwaye umba ugqatso uyeza up kodwa i bathi kunzima ukufumana umfazi emhlonelayo uYesu ilizwi ngubani kwabazalelwe american ufana nam ngenxa imiba yenkcubeko impembelelo pentacostalism kunye nenkqubo matriarchial kwinkcubeko Native American. Enkosi ngenxa yamazwi akho
Krih • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:37 pm • impendulo
Ndandikuthanda ukufunda eli Trip post. Mna fan enkulu eyakho, kodwa Ndiyayithanda into yokuba avulekileyo malunga nomba ngokobuhlanga. Nyaniseka, uhlanga kufuneka Akukhathaliseki xa kufikwa ngubani we batshate. Inye kuphela into ekufuneka Akukhathaliseki na ukuba ungumKristu, ukuba zihambelana nokuthanda kukaThixo ubomi bakho. Ngaphandle ezibalulekile, uhlanga okanye ibala lolusu nje umahluko sikhangele. Mna umhla ngaphandle yohlanga lwam. Mna abamnyama kunye ex yam Korean / White. Akuzange kube umba kuthi, kodwa ndikhumbula amaxesha xa sifumana ngamehlo ezivela kwabanye. Yaba ngamava umdla, kodwa akukho namnye kelwa (leyo kakhulu) inokundinqanda ukuba uthandana nomntu ngaphandle umntu yohlanga lam okanye atshate nabo. Oko akuzange umba nam, intsapho okanye abahlobo bam. Ingongoma, sonke esiyithandayo, kodwa simele sinikele ingqalelo koko uThixo afuna ukuba ubomi bethu okokuqala. Nice ukubona ukuba le ngxoxo positive.
paul • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:40 pm • impendulo
Ingaba ikhona indlela yabucala apho sixubushe lo mba, njengam kunye u.
menye • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:46 pm • impendulo
Ndiyabulela kuThixo, ukuba wena wabhala inqaku kuba nje abafazi abangamaKristu eyodwa, Ndiya qonda indlela ekubaluleke ngayo ukuba luvuleleke ngokupheleleyo oko uThixo, kuquka ungubani uvumela ukuba angene ebomini bakho uze uphume kuyo. Ndinombulelo kuba ingxelo wenza ukuba “kufuneka bangenise iminqweno yethu ukuba oko uThixo afuna ukuba sibe iqabane”. Oku ngaphakathi ngokwayo isinceda ukuba ivale indlela yam yokucinga yaye ekwazi ukwenzela ukuba kugxininiswe koko uThixo afuna kum ubomi bam. Ndingumntu omnyama kwaye preferenced abantu abamnyama; ke uThixo usebenza entliziyweni yam kuloo ndawo ukususela ekuqaleni ukuya kumfuna malunga indoda uThixo. Cinga eneneni indlela abantu abaninzi khetha umntu engalunganga ukuba atshate okanye uyaphoswa uThixo analo ngabo ngenxa yabo izithintelo / ukhetho. inqaku Great! Iye wayisikelela ngokwenene kum kwaye ndiqinisekile nabanye abaninzi kangaka.
Rubber • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:48 pm • impendulo
Ukuba evela South and biracial, Ndiye kuqwalaselwa ungquzulwano ngokuthandana exube kakhulu. I ungaya ukuba ungumntwana omhle kaThixo oko abanye ukuqwalasela impazamo okanye ekhula. Kho- na ukuthetha phandle kule! Ithemba indoda yam njengoko kuwamkela kum njengoko wena nomfazi wakho aba ngalinye enye! 116!
UY • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:50 pm • impendulo
post Good i ucinga ukuba eninzi amaxesha akungenxa ukuba zikhetha uhlobo oluthile lombala okanye uhlanga, kuba oko zisetyenziswa. Nguwe ukuba ngumKristu kunye nokuvumela uThixo ukuba uvule amehlo akho wena ufumene into yenu elungileyo. Halala bhuti.
akubusise • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:51 pm • impendulo
Ricky • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:52 pm • impendulo
post Uhambo Great! Akukho gumbi evangelini ukuba nobuhlanga.
Daniel Troutman • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:53 pm • impendulo
Ndicinga ukuba epholileyo okrelekrele ukuba ubhale le post. Inceda abantu ukuba uthando akazi iindidi ezingenamsebenzi ezifana uhlanga okanye ubuzwe. 1 Korinte 13 ayithethi nto uhlanga; kube ethetha nomonde, ukuthobeka, nobulumko. ups Big kweso sithuba enkulu!
Ngaba • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:53 pm • impendulo
Oku ngoku! Le yintsikelelo. Ndakhe ucelwe, wabona ubuso nezabo, ndaza ndeva abantu bethetha kutheni / sahlala okanye indlela aba “kwakhuthazwa”. Ndathandaza ukuba umfazi owoyika uThixo nguye owandithumayo kuyo. Ndiyamthanda umfazi wam okhoyo zimhlophe (Ndiyavuya abamnyama). yena & abantwana bethu intsikelelo enkulu ivela kuThixo wam andizi uyayifuna nayiphi na enye indlela. Enkosi ngokunyaniseka kwakho evulekileyo. Uthando kuko konke.
Ndinebhonge nge 116!
major • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:02 pm • impendulo
Trip indaba enkulu kunye Halala. I andithandi ukuba acaciswe ukuba ukhetho lwakho umfazi akunanto yakwenza nento engalunganga okanye angekhoyo umfazi omnyama. Ibali kushiya isikhewu kuloo ndawo. ngokunjalo, oko kufuneka kwenziwe kwacaca ukuba mhlawumbi ukhetho lwakho ecaweni kunye isikolo ndikubeke kwisimo ukuba abafazi abamnyama emhlabeni ezimbalwa. abamnyama abaninzi bahlala nje abambalwa kuzo zonke iinkalo zoluntu yaye oku kube nefuthe kwi kwimitshato uhlanga efanayo. Mna buqu angathanda ukubona abafazi abamnyama kunye namadoda quality abamnyama, kodwa andikwazi aphikisane ngoko uThixo akumanyileyo. iminqweno Best wena kunye nosapho lwakho b
david • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:06 pm • impendulo
blog Excellent. Ndiza ukuba ukusebenzisa igama elithi “wifing” ngoku. nhlonipho, kanjalo.
Sean • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:07 pm • impendulo
Umfazi wam & I amhlophe… si 3 abantwana abamhlophe 1 indodana Afrika (Yuthophiya). Sifumana eminye imibuzo efanayo kunye ngamehlo odd, kodwa siyazi ibimiswe nguThixo ukuba abe intsapho!
Ndiyabulela ukunyaniseka yakho ngokuphandle ukuba ukuthanda kukaThixo ebomini bakho… endicinga ukuba ingongoma ephambili inqaku lakho – Ukufuna ukuthanda kukaThixo kunokuba esiyithanda eyakhe!
Le ngcamango Biblical ingaba “ikopishwe & baxhoma” zonke iinkalo ubomi amakholwa… kwaye kufanele!
jholy • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:10 pm • impendulo
Ndiyayincoma ngentumekelelo yakho ukwabelana zakho “izizathu” ngokutshata ngaphandle ngokobuhlanga. into yam yokuqala, njengomntu yendela kwindoda nomfazi Asian, ukuba kutheni ucinga ukuba kufuneka ukuzithethelela le mntwini. Kanjalo, yeyam wam yomfazi’ ithoni isikhumba efanayo, iimvelaphi zethu abakhule ngayo kangaka kude kwabanye ngalinye, ubani uthi “kutheni utshata naye?”Njengoko kukhankanyiwe, umfazi wakho, THE umfazi, THE nayo, enye (ukuba nomfazi wam ukufunda, “ENGCONO”) beyiseka ukuba uye walungiselela. UThixo abo ebomini bethu ukuba kufuneka ukuba sibe, ukuze umngeni kuthi ukuze sikwazi ngcono. Ngoko ke xa umntu ebonakala yahlukile kum ngaphandle. Ndikucacela, simele sonke ukuba bafuna abo uThixo efuna intliziyo lesiphumo intle umntu ilifa.
ukuba • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:18 pm • impendulo
post Great. Ukunyaniseka Ndiyakholwa ukuba amaKristu amaninzi abafazi abangamaKristu ngakumbi eyodwa (ngokwam ifakiwe) ukuba uyakutshata okanye idlulileyo benditshate kungekudala ukuba ndabagxotha ezinye iingcamango zethu nzulu. Nje kutshanje ndiye ndaqalisa ukuthandaza kuThixo ndifuna okusemandleni ur. Kufuneka sithembele kuBawo wethu waseZulwini ukuba uyakwazi oko sikufunayo. into yam kukuba Ndifuna indoda owoyika uThixo yaye ndiyakuthanda ndathi njani ukuba into ephambili ithatha uhlanga nangona uThixo uya kusisikelela neminqweno yentliziyo yethu. UThixo post omkhulu n asikelele
Nicole • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:20 pm • impendulo
umsebenzi oMkhulu ukubonisa nje wena, kodwa ukwenza oko ngendlela abanye baqonde. Xa siqala ukutshintsha imbono yethu ngobomi jikelele, siza kubona ezininzi oko “silindele” akunanto yakwenza ukuthanda kukaBawo. sifuna ukusondela kuye, i ngakumbi nangakumbi wethu “balindele” ukutshintsha kuba beqala kukulayinisha nokuthanda BAKHE kungekhona eyethu. UThixo Mbongeni wena nosapho lwakho. Qhubeka wenza into oyenzayo umzalwana wam kuKristu. Mnyama, amhlophe okanye emfusa, umbala idlala akukho indima xa kufikwa umzimba kaKristu kokuhlanganisa. Ndiye basikelelwe nendoda emangalisayo kaThixo, okhoyo yohlanga yam efanayo, kodwa ngaphezu nantoni yena indoda engantliziyo kaThixo apho zonke izinto encwadini yam.
Andrea • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:22 pm • impendulo
Enkosi Uhambo! Kuba ngenene mna ndicinga ngenye indlela yaye maxa wambi ndiye ndazigcina njani ubude iingalo ukusuka kwezinye abavukeli elungileyo nje cos ndingazange sibabone enomtsalane. Points kwimiba nekratshi. Kodwa ngokwenene wakhuthazwa izimvo ngokuxhasa ubudlelwane exube. Ndinqwenela usapho lwam zabele ezi izimvo. Ukuba ndinokutshata umntu omnyama, akuyi kuba lula.
jason • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:38 pm • impendulo
Ndicinga ukuba mkhulu obukhe wawajonga ibala elidlulileyo nobuhlanga. Andikwazi ukuma xa abantu bakholelwa ukuba loo yaye bafuna ukuhlala phakathi uhlanga lwabo ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Thina singabantu nemibala eyahlukeneyo ulusu bonke bachatshazelwa isono. intombi yam Spanish yaye mna abamnyama kodwa andizange khangela kuyo babone umfazi Spanish, Ndijonga kwaye ubone nje umfazi, kungakhathaliseki ibala lolusu okanye uhlanga.
MrsHendrix • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:48 pm • impendulo
Amen. Mna ubusiswa impendulo yakho. Xa sibe nolwalamano kunye noKristu, intando yakhe uba intando yethu kunye nentando yakhe ukuba umfazi nomfazi wakho lol…. (ukuba baze kwenza ingqiqo). Ke zenzelwe naye ingakumbi ngenxa yenu isekela-okumnyama. Yena mhlawumbi abambe eninzi flack ngokutshata “mnyama” dude, iNkosi, kodwa wayesazi ukuba nobabini kwakufuneka kanye into. Funa Yena kuqala kwaye zonke izinto ziya kongezelelwa kuni (kuquka iqabane ekunene).
Hlala umzalwana Hayi, uze uqhubeke ukuba ube yintsikelelo kwabanye ngokunjalo.
Leilani Bailey • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 3:48 pm • impendulo
UThixo Sikelela Union Uhambo lwakho.
Siyabonga ngokwabelana ulwazi lwakho lobuqu.
umnqophiso Umtshato Koothixo akunalo umbala okanye uhlanga. Uthando lwakhe olungunaphakade udlula zonke..
stacy • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 4:05 pm • impendulo
Ngoko ke ndiyavuya uthumele le. Njengoko imveliso umtshato kabini-ngokobuhlanga yaye umfazi umntu ayibonisi nokuba kubo :) isihloko wokwenene kakhulu kum. UThixo uye wandisikelela ngokuncamisileyo nomyeni wam, yaye kuba buhlungu kum ukucinga kukho abo ubani obelapho uphume onokungasamkeli oko uThixo analo ngabo ngenxa yokungazi zabo / ubuhlanga.
line favorite: “Mna ke wifed naye.” HLEKA KAKHULU!
natalie • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 4:30 pm • impendulo
Yintoni isihloko enkulu, kunye Im Ndiyavuya ukuba kukho abantu abafana nina Ngokuvula incoko ngento enjengale nokuba real nayo, kuba kwakusoloko kukho kubonakala ukuba kukho ibala elihamba kubudlelwane exube.
Ndingumntu Chinese kunye nomyeni wam omnyama, kunye nokulwa esijamelana nazo ecaleni uhambo lwethu kunye ziye ezinzima kunye novavanyo lokwenene. Satshata abatsha nje wena nomfazi wakho, bendi 21 kwaye waba 24. Si 2 iintombi kunye, yaye xa Im yedwa nabo, Ndiza ukuze wayeka esitratweni kunye besiya kuba ngathi “lo black daddy?”
Uninzi zonke umzabalazo waba nentsapho yam, kuba Andizange ndicinge ukuba ndibe kutshata umntu omnyama. Saba ngomtshato encinane ngaphezu kwesiqingatha usapho lwam wala ukuza. Kodwa uThixo emangalisayo kuba kuwo wonke loo, ityala ukholo umama wam, yabalinga, imiqondo kwintsapho yam itshintshiwe. Umyeni wam yamkelwe ngoku, yaye umama wam ukuvuma ukuba abe ngunyana wayo emthethweni ngoku (nto leyo omkhulu kuthi!) Kukho kusekho ethile indlela ukuya, kodwa kangangokuba sele iqhubele phambili ukuba ndimnike zonke uzuko kuThixo. Gcina it up Uhambo, ukuba likhuthaze nabanye yaye ndithandaza ukuba uThixo uya kuqhubeka ukuba anisikelele, usapho lwakho entsimini yakho.
PS: Kufuneka ukuba ehle ukwenza eLondon, UK ixesha!!
LoganSharp • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 4:38 pm • impendulo
Utsho kuhle kakhulu. Inkosikazi yam kokufika, Ndiyavuya amhlophe. Uhlanga akazange weza ingcinga kum ngenxa eninzi kakhulu into wathi xa uthe wadibana umfazi wakho; Ndabona uthando umfazi wam ukuba uThixo, umnqweno wakhe ukuze balungiselele kubafundi yaye saba ezininzi eshukumayo efanayo kunye umculo wathandazela sithumelelane iisms ebudeni ukuthandana. Andazi ukuba kutheni abantu becinga imitshato exube are “uyinqaba”.
Enkosi ukwabelana ukuba nabalandeli bakho ekhuthaza.
natasha • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 4:39 pm • impendulo
Oku kuhle! Enkosi ngokuba uhambo ukwabelana. Uthando lukaThixo akukho kukhetha ethile kodwa ukukhululwa. ibali omfunayo kwaba yintsikelelo.
LeonMartinez • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 4:41 pm • impendulo
ubungqina Beautiful! Ngokunyaniseka lo wathetha nam yaye nangona Akuzange kukhe kufuneke akukhethayo ngokobuhlanga okanye into elolo hlobo, kunjalo ziyaqinisekiswa kum ukuba uThixo uza kubonelela into KUFUNEKA, akunyanzelekanga ukuba ufuna. Unayo iphefumlelwe oyinyaniso obuphilayo ngamandla ubomi babo uThixo. UThixo Mbongeni wena ifam yenu ezintle!
Reewantae • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:01 pm • impendulo
nqaku libangel ', uhambo! ixesha commenter sokuqala apha!
Wena njalo kwi ngongoma xa nithi, “Ndandingayithandi ukuxabisa iinketho wam umfazi phezu izinto ezifunekayo umfazi.” Ngamaxesha athile, Ndiziva ngokungasiwa elilithokazi kuba ubuntu bam kunye nezinga Iindlela ezimfutshane ziyindlela ethile. Mna into Kusenokufuneka ubize “uyinqaba” okanye “ezahlukeneyo” njengako kubantu abaninzi ndiyazi. Ezinye guys ngathi intombazana eyona kancinane kwidizayini aqhelekileyo okanye umntu loyi kancinane ekuhlaleni kwaye phandle kunam. Ngamanye amaxesha, Ndicinga ukuba mhlawumbi ndenza ngokwam ngaphantsi zifumaneke ziingcamango zam yobuntwana ukhethe. Abo iindlela ungekho ngokobuhlanga, kodwa ngakumbi imvelaphi umntu okanye indlela yawo yokuthutha… kuba kukhwela ibhasi eya esikolweni, Mna ke ukwazisa oko xa kukho umfana ezama ukuba adlale nam kwisithuthi sikawonke. (Uluvo apha kukuba, ukuba njengoko umntu ekhwele ibhasi okanye uloliwe, ukuba awunako ukufumana imoto enye, unayo imali encinane okanye uchitha phezu izinto eziphosakeleyo, yaye ngoko akukho ishishini uzama ukuthetha kamnandi nam. HLEKA KAKHULU… kodwa oku nalo engalunganga.) Mna ndithandaza ukuba uYehova andincede ukuba bahlale ukuthanda kwakhe, ngenxa yobomi bam, ukuze xa kufika ixesha lokuba umntu othile ukuze ufumane “into elungileyo,” Ndiza sikulungele. :)
inkosi ikusikelele, Bro.
June • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:25 pm • impendulo
I ngokupheleleyo ndiyavuma ukuba uhlanga kufuneka kube yenye yezo iinketho nesandla esivulekileyo, kodwa andivumelani ukuba, okanye ezinye 'ozikhethayo’ kukhona lutho xa kusingethwe ungquzulwano. ngelishwa, Ngokwamava am, into Ndaziva yaba ukukhetha ngesandla evulekileyo, futhi yazinikela kuba wayenomdla indoda emhlonelayo uThixo phambi kwam,waba umthombo kakhulu ukugogeka emtshatweni wam, iminyaka emininzi kamva, xa umyeni wam wazuza alot sobunzima, phezu koko sele ingqwalasela kwaba kwisakhelo utyebile. Ndandisoloko sele ebethanda iintlobo ezininzi kwezemidlalo, ngoko xa ndandijongene ngakumbi inzuzo ubunzima, Ndiyavuma, I lwajika ngokwesondo off. Oko kwakhokelela kungquzulwano, kwaye ungquzulwano wenza kukhetha abe intaba. Endaweni yokuba likhetha elula emzimbeni ndayibeka bucala ngokuthanda umfanekiso obanzi lendoda emangalisayo kaThixo nguye, ungquzulwano thina ukuba ngam Musa ukuba nomdlandla ngesondo, iimvakalelo edale ukuba 'wanikela phezulu’ into leyo ebaluleke obubambekayo yaye kuyimfuneko, yaye ijongene ngoku kokuba abe liqabane dutiful onothando ngesondo nomntu ndandingakwazi ukuphendula emzimbeni. ubabalo lukaThixo kuphela kuye kuthi ga ngoku, kodwa, ngokunyaniseka, umzimba wakhe lisekhona ithuba enkulu off, kwaye nangoku Akwaba ndabambelela kukhetha wamlinda umntu naba uhlobo wam emzimbeni, kwakunye nemfuneko yam indoda emhlonelayo uThixo
Danny • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:26 pm • impendulo
yaye, kodwa ndandifuna ukutshata kuwe. Good kuwe kunjalo. Okubi kum..
SheilaTurner • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:28 pm • impendulo
Njengoko umntu multi-waqonda, Ndiye ndakhulisa abantwana bam ukuba sijonge umlinganiswa umntu xa ukhetha isoka / nentombi kunye ngaphantsi malunga ibala lomntu. Ngenxa yokuba yomhla abantu abavela kuzo zonke izizwe sebesazi kwizizwe ezininzi. izimvo wam ebesoloko njengoko ubaphatha ngentlonelo kwaye ubathande, bendingubani mna ukuba ndithi kuni, ukuba akayi kuba ukuba umntu ngalo elisekelwe kwibala lomntu.
Ndimele ndivume ukuba inxalenye ndiyithandayo kule blog le ngxelo ilapha, “Ndandingayithandi ukuxabisa iinketho wam umfazi phezu izinto ezifunekayo umfazi.”
Ukuba kanye kanye pha uyibeka!!!!
eric • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:42 pm • impendulo
Iindaba ezimnandi! She is nokuba “mhlophe”! Kwaye wena nkqu “mnyama” uhambo. Loo magama kwibhanka. Makabongwe uThixo thina sonke ugqatso enye okwabangelwa. Nangona thina ethnicities ezahlukeneyo, thina saxolelaniswa kuKristu! Amen ibhulorho. isihloko Good. enye Igazi. enye Nyana.
Jessica • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 5:49 pm • impendulo
Kuhle! Siyabonga ukubhala le. Wena kwabakhuthaza onjalo, Ndibulele uThixo kukho izibini uThixo ngathi wena nomfazi wakho phaya. ngokunjalo, Ndiqinisekile ukuba sonke, uyakwazi ukufikelela abantu ezininzi ngaphezu uya kukwazi ngaphandle. Qhubeka reppin uYesu.
Khankanya: Kutheni watshata Girl White ngu Trip Lee | 9jagirl4real
Leesa • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 6:03 pm • impendulo
Oku ibisoyikeka ukuba ukufunda! kuyakhuthaza kakhulu. Mna baphathwe izimvo disppointing kunye rasist. Umyeni wam iqaqambile, mna abamnyama. Sobabini Sivela ukuya ilizwe diffrent ngokupheleleyo. Andizange ndicinge ukuba ndiza kutshata ngaphandle uhlanga yam. Ndade ukumfuna wathandazela ukuba uThixo wambona, umntu omnyama kunye uzuza kanye lol. Kodwa ndiyambulela uThixo wayesazi ngeyona nto kum kwaye basikelelwe kungekhona nje umntu omhlophe ke ukumkani kwam emhlabeni! Ekubeni Kudala singatshatanga Ndiye ndaqonda ngokwenene oko kuthetha kona ukumthanda kula imizimba yasemhlabeni. Ukuba bangaxeleli yonke Biz yethu kodwa siye silwa nemiba wenzala ndiyambulela uThixo ngenxa nomyeni wam ngenxa yokuba uye waqhubeka endikhuthaza. Siyakuthanda umculo wakho kunye ubulungiseleli bakho. UThixo akusikelele wena nosapho lwakho!
kaileybrown • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:27 pm • impendulo
Ndimhlophe, kunye nomyeni wam omnyama. Xa i nokumazisa abantu abaninzi alinde de amagqabi ukuba athi “yena isnt into i kulindeleke!!” yayifudula kundenza uphambene. Kanye, ungubani na wena, umgwebayo umtshato wam. Ngoku i uvume nje athi “yena wasnt oko i kulindeleke nokuba, kodwa ndiyakwazi 100% ukuba nguye uThixo wathumela kum” nice wayo ukwazi aproach yakho. Kwaye wazi nje abalandeli bakho benene bayazi kutheni ngumka wakho.
Taylor • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:37 pm • impendulo
ukuba “martin” Comment ndibe uzibhuqa emgangathweni ehleka…kodwa ndivakalelwa yonke le Blog!! Umntu ukhangela phezu Ngaphandle uThixo ukhangela intliziyo. Umfazi wam wayedla ucaphula ukuba Intliziyo womans kufuneka njalo ikuye uThixo. Ukuba umntu afune kuye Ukuze Fumana ngokwenene kuye…
jake • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:51 pm • impendulo
Bonke abo, nabhaptizelwayo kuKrestu, nambatha uKrestu, akukho mYuda namGrike, Scinthian nor owalukileyo nongalukanga. Le inyaniso kutyhilwa an engcwele, kunjalo, ezininzi ikholwa kusafuneka “unrenewed” ezingqondweni yiloo. Kutheni nangobuhlanga kunjalo ngumba. Ndiya kuqhubeka ikhule nenimba ade uKristu amiliswe ngaphakathi sonke.
Pamela • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:53 pm • impendulo
igama Good! Mthande pics usapho. iintsikelelo!
Leesa • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:54 pm • impendulo
Mna nditshatile kodwa ixesha elininzi nabazala bam kwaye utshate yabantu abaphuma kwiintlanga ngeentlanga evela ehlabathini lonke ihlabathi. Lipholile ukuze iintsapho zingenziwa abaninzi kangaka nezikhumba ezahlukeneyo imibala. Ndicinga imitshato ukutshatana mahle kangangokuba kuba isikhumbuza ukuba bonke abantwana Bakhe wadala ngokulinganayo zinhle. INkosi ukhangela intliziyo ngoko thina ngabantu ubuhlobo zothando.
IAMDJLADYJ • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 7:54 pm • impendulo
Oku iphefumlelwe yaye wandisikelela ngeendlela ezininzi kangaka. Ndiyakuthanda ukubona izibini exube / imitshato! Kuba Ibisoloko umnqweno wam umfazi omnyama ukutshata ngaphandle uhlanga yam. Ndikhangele phambili mini ndiya kuhlangana iqabane lam esazi yena wathatha ngesandla kwaye yakhelwe kum! Kufuneka ukufumana kuloo ndawo ngaphezu kwayo yonke enye into apho babuyele kuThixo yaye wamkele ngako konke anako ukuba. Ngokuqinisekileyo oko KULUNGILE ukubuza okanye sixelele uThixo oko u okufunayo okanye efana. Dig le He kakade uyazi. Kungcono noko ke uyayazi into ekholekileyo ngathi. Ngoko ke kufuneka ukuba, qikelela ukuba yintoni na esiyicelayo sithandazela okanye. Yintoni u Ufuna akusoloko ngoko kufuneka u! Themba uThixo wenze izibongozo lakho uze uvumele ukuba wenze ntoni!
AmandaB • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 8:05 pm • impendulo
Ndiyavuya ngokwenene utshate Jessica. Yena umntu emangalisayo ngentliziyo emangalisayo. You ezimbini abe nempembelelo emangalisayo abantu njengoko isibini esitshatileyo uthando kunye nabanye noYesu. enkosi nje kangaka ukuba ujonge intliziyo hayi umbala phezu kobuso.
Paula • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 8:23 pm • impendulo
uhambo, yonke i ongathi elibalaseleyo, amazwi okuchaza uvuyo kakhulu ukuba ufuna ukwabelana elubala enjalo kutheni utshate umfazi wakho, Oku kuya ngokwenene ukunceda abo kubona kwenye ngokwembono yaye mhlawumbi ngokutshata kwixesha elizayo. ngokwenene uThixo uyayazi into ekholekileyo ngathi. Ngamana uNdikhoyo kuqhubeka kuthamsanqela usapho lwakho!
atiya • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 8:25 pm • impendulo
entle & emangalisayo….
dmoney • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 9:00 pm • impendulo
uhambo, enkosi mayele inyaniso ukuya abangazi nto kunye nam. nangona i am im abamnyama wayesoloko lichazwe ngokwam ngumntu wolunye uhlanga eyahlukileyo. kodwa i UThixo sele kancinci usebenza nam ukuba kuwamkela zonke iintlanga yaye eyona nto ibalulekileyo intliziyo yakhe bubonisa ukuba uKristu. Thats ezibaluleke kakhulu. Plus unalo uthando ngokupheleleyo kunye nenkxaso ibandla lam ikhaya. sigcwele lezibini biracial kunye kids ezahlukeneyo izinto. plus i baninzi kangaka elingumxube kukho basuka kwilizwe lol. im nebhongo ukuba zime kunye nokubalisa ihlabathi oko kufuneka ukuva :)
SP • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 9:09 pm • impendulo
Ndandikuthanda ukufunda le post, uhambo. It singamaxhoba. Endikhonkxwe ngenxa i ukutshatana. Ndimnyama (Jamaica, Umhlalii wasemelika, uzalo angaya ku) kunye nomyeni wam Hungarian, IsiJamani, njalo-njalo yena emhlophe. Ndandisoloko ndisazi ukuba ndiza akayi kuyitshata guy emnyama yaye ndandingazi ukuba uhlanga kuya kuba umyeni wam elizayo. ufana kangaka nje wena, Ndaya kwikholeji engafuni umhla kodwa ukhule ngoKristu-ngumlandeli kwaye ufumane imfundo kwaye ayedibana wamthanda nendoda eyodwa oselula emhlophe.
Xa saqala uthandana, iinyanga ezimbalwa sasisazi siya batshata ngenye imini kwaye wenza kanye ukuba kwiminyaka embalwa kamva. I nelungelo ngokwaneleyo ukuze akhule ukuya kwindawo ezahlukeneyo kunye namalungu osapho nabo ubudlelwane exube ukuze babe, umbala yakhe isikhumba akazange ngezigaba kum. Ndabona naye ngokuba ngubani na; indoda enobuthixo esingayilungisanga intliziyo izele luthando, ukuthobeka nokuba nobubele. Yena ezidlulileyo ulusu lwam umbala wakhangela ngokunjalo, ujonge entliziyweni yam, ebona ngenxa ngubani mna ngaphakathi. Akukho mathandabuzo ukuba uThixo wasikhupha ndawonye. Ndandingakwazi ukuba isandla-yalwa umyeni elingcono mna ngosuku olunye. Ewe, Ukuze ube okuthandwa kakhulu mayela noko wayefuna mna nomyeni wam ukuba, kodwa inyaniso, ngokwenene uThixo wenza undinike kakhulu ngakumbi kunam bafanelwe kwaye kakhulu ngakumbi ukuba ndithi, Andizanga ndinazi I baze bafuna.
Kukho amaxesha xa ekubeni isibini ukutshatana kubonakala kunzima kwiimeko ezithile, kodwa ixesha lokugqibela Ndiye-sonke ophela umbala ofanayo.
Jeffrey • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 9:34 pm • impendulo
“Akukho nto ke ukuba iphosakeleyo ezikhethwa, kodwa kufuneka ukubabamba ngesandla evulekileyo.” quote Great kuzo zonke umthambo zobomi!
MarcosJackson • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 9:46 pm • impendulo
Ndiyabulela obhale le! I kunandipha ukunyaniseka nokungafihli. UThixo akusikelele ngayo kuni nobabini!
Melodye • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 9:57 pm • impendulo
I Ndinombulelo abantu abakulungeleyo ukuphulaphula uThixo ngaphezu eluntwini kuzo zonke iinkalo zobomi kwaye kuvumela iingqondo zabo ukuba bafane ukuthanda Kwakhe nendlela yakhe. Ndicinga kuvamile ukuba nakubona ibhokisi kunye parameters ukuba abeke phezu ngokwethu. Intsapho wam zomkhosi sibe ngawo colorblind kangaka becala zonke yokukhula. Kunjalo ezikhethwa eMzantsi neemposiso ngukumkani olukhulu, bavame… Ndada ukuba umhlobo guy osenyongweni kwikholeji ukundixelela ukuba mna amahle kakhulu, smart, intombazana emangalisayo ke ndina wakha ezaziwayo kodwa nje akazange wacinga usaya kuthi ga ngoku i ___( ukufaka uhlanga apha)___ ntombazana. ENDAZIYEKA INTLIZIYO YAM. hah yaye andizange nje naye ngaloo ndlela. Ndiyavuya ukuba wena ukuba ukuyithanda kwaye ke ngokuzithoba lokuvula ibali lakho phezulu kwabanye.
jason • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 10:43 pm • impendulo
Numbers 12:1-11…Akukho mfuneko ukuzithethelela ngokwakho ukuba amadoda bhuti, bafuna ukubonisa ukholekile eNkosini. A intliziyo ehlambulukileyo & ukuthembeka towards iNkosi uYesu, uya ukurhoxisa nayiphi na intlawulo okanye amagama nawuphi na umntu Spek nxamnye nawe.
kangstawillz • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 11:15 pm • impendulo
uhambo Yo u unguye man.I iza kwenza i same.lol.I uza kutshata eNkosini kunye ibala uhlanga,e.t.c akayi ngandiliseki, logama nje yena uThixo one.GOD bless u umntu.
Lindsey • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 12:00 mna • impendulo
Its kukhuthaza gqitha ukuba ufunde le. Ndingumntu ezimhlophe kunye nomyeni wam omnyama, yaye uhlala kwindawo ikakhulu kokufika. Si 2 amantombazana amahle kodwa njengoko unako ngqondweni sifumana alot ngokuqwayinga. Iintsapho zethu kuhle ezimbi ngamaxesha. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ndiye ndafunda kukuba nangona kukho umahluko zenkcubeko (ingakumbi xa kuziwa ekukhuliseni abantwana), eyona nto ibalulekileyo kukuba ukugcina iintliziyo zethu kunye neminqweno uYesu.
FortuneLawrence • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 1:20 mna • impendulo
Mna ngoko nisikelelweyo Uhambo lwakho ngeposi!
Ndinombuzo nakuba. I am an African(mnyama) lady mna ndikhetha guys abamhlophe abamnyama. Loo nto kakhulu kuba andifuni bekhululekile ukuze ezinye izithethe kwilizwe ekhaya. Ndimele ndithi, Ndiyakuthanda abantu abamnyama kakhulu kodwa ngathi mna ndathi, lizwe wam ezinye iinkolelo etyeni. Ungathi wena ndithi engalunganga ekwenzeni ukhetho ezinjalo?
Julia • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 1:53 mna • impendulo
Isihloko Uhambo Great. Ndiyakuthanda oko wathi uhlanga hayi ukuba umba. Mna ezimhlophe okanye ubuncinane khangela ukuba abantu abaninzi. I wakhulela kwikhaya biracial…umama wam Italian kwaye kokufika kwaye utata wam emhlophe. Mna ngoku ndithandana nendoda omnyama ongenayo athe wampompoza nam na ukuba ugqatso efanayo kuye. Lowo undibonayo oluhle. amabhinqa amnyama kwelinye icala kundibona njengesoyikiso. Abandibonayo kuphela mhlophe…ukuba ubusazi nje inyaniso. Kufuneka Akukhathaliseki ukuba uhlanga nina nonke into ebalulekileyo kukuba umntu 5Wabadenda u atshate iyakholwa kakhulu. Enkosi kwakhona inqaku.
daniel • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 6:27 mna • impendulo
Ndandidla ukusebenzisa iivesi ukuba nizityhafise olu hlobo lomtshato. “UAdam noEva mhlawumbi umbala ofanayo / Utata uSamson afuna ukuba atshate nomntu evela kubantu bakwaSirayeli / Utata uIsake kaThixo waya umzamo omkhulu ukufumana umfazi phakathi 'kwabantu bakhe’ Isaac, etc…”
Iingxoxo My kule sihloko babengenabubele, zinamabala yaye - kakhulu phandle - ndawo.
Ke ngoko uThixo Intliziyo yam wandinikela kwimeko apho kwakungekho ukhetho kodwa bakholosa ngaye. Wandifundisa yintoni na ukuthembela kuye. Kwaye yiloo xa ndaqalisa uzixabise abo ngeenxa zonke kum nabo bakholose ngaye. Ndasondela ngakumbi abantu bakaThixo - kungakhathaliseki imvelaphi inkcubeko - yaye wamthanda nabafundi bakhe ngenxa yobabalo, ukholo kunye nothando wabonisa.
Kwaye yiloo ndlela le American Ndaphela ngokutshata elihle, intombazana Brazilian kokuhlonipha. Ibiyi 10 iinyanga kunye uThixo asifundise thina sobabini kangaka! Kuye ubudlelwane elithozamisayo eye yabonakala ngokuphindaphindiweyo: iindlela zikaThixo kungcono, xa imibono yethu ngokuvavanywa.
Tracy • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:05 mna • impendulo
Bendisoloko ndicinga ukuba umntwana uziva kunokusetyenziswa. Ndiyazi mna ndiza ndifuna ukuba ngokupheleleyo uhlanga okanye enye. Bekuya into leyo, IsiTshayina, Eskimo, Indian etc. It is a umbuzo Andizange ndive ingqwalasela.
ELVISNIXON.com • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:17 mna • impendulo
Hungarians are Magyars. Magyars siyinzala lineal ka Attila i Hun (yoko igama elithi Hungarian) abo badla ngokubizwa ngokuba “aweza Mongolian” -Attila isekhona omnye ethandwa kakhulu amakhwenkwe amagama e Hungary- njengoko ayinjengeArpadi- ngoko ke,Nngokobuchwepheshe, Asia.
Ngoko ke nokuba ohlukeneyo / esineenkcubeko kunokuba ubucinga!
RyonFreeman • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:32 mna • impendulo
BrendaF • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:37 mna • impendulo
Leyo ibisoyikeka! uhlanga lwakhe ngokunyaniseka akuzange nqakraza kum de i wabona le post. Mna abamnyama kunye nomyeni wam bethuna abamnyama nabamhlophe (nangona yena ubheka kokufika) kwaye i ukufumana iziqhulo lonke ixesha abantu besithi ukuba andiyithandi abantu abamnyama. Yho hayi ke yona abantwana bam. bol! Kuhlala a take kabini. Ndiye ndatshata 7 iminyaka kwaye nangoku funny kule mini. UThixo akusikelele wekhaya lakho!
TamaraC • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:41 mna • impendulo
Amen! Enkosi! ubungqina lakho liya ehlabathini lonke… Abantu kufuneka ukuba. inkosi ikusikelele!!
Umyalezo ovela Germany, Europe!
Keinya • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:44 mna • impendulo
Ndiyayibulela le posi kangaka. Mna kwakunye ngendlela ukutshatana kunye nomyeni wam sobabini amabali malunga nendlela abantu bazi yaye uzive ngathi ukuba usazi kahle ngandlel 'ufunde oko amaqabane ethu Kubonakala ngathi okanye kwimeko yam ubona pic ye abantwana bam (ngenxa yokuba akwazi kudlula ngenxa inkangeleko yakhe yedwa de ube uyazi ukuba ziyinxalenye abamnyama ngoko ukuze ukubamba iimpawu ezithile kancinane) yaye ngoko nangoko uyabona ukuba kufuneka kusenokwenzeka Awunayo i utata abamnyama kwaye oko kwaba amathemba abo. ngokunjalo, abantwana bam ngokutyibilikayo ukuthetha olunye ulwimi ukuze liyazixakekisa abantu ngokwenene ukususela igama lethu yokugqibela uLawrence. Kukho ibali emva koko kakhulu ngenxa yokuba ngokobuhlanga ingxubevange kakhulu (nje ayikho mnyama). Ngenye indlela, Ndiyayithanda into yokuba wachukumisa kule ngenxa yokuba ezinye, oko omkhulu onjalo yaye nzima njengokuba kukho abathile mpembelelo enamandla yobuhlanga nengcinezelo kwihlabathi lethu (media, abantu esibathandayo nokuba, abahlobo, njalo). iimvakalelo zam efanayo neyakho kunye nabanye abaninzi abaphawule. Enkosi!
Keinya • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:48 mna • impendulo
Kunjalo nje, I LOVE ingoma “into elungileyo” zenkosikazi wakho. It Intle ngenene kwaye endenza ndicinge ngayo ulwalamano lwam. Thx umculo enkulu kakhulu! :)
Logan • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 9:17 mna • impendulo
NDIYATHANDA “robot”!!! Ndiza ukuba dancing kuyo ibe zomkhosi.
Michael • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 9:37 mna • impendulo
“Mna ke wifed naye.” Ndiza weba ukuba.
TylerDouglas • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 9:53 mna • impendulo
OH KHONA ON!!!!! I am abaseAfrika, yaye ndibone yonke isiqephu Martin
Debbie • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 10:08 mna • impendulo
Ndivuya kakhulu ukufunda eli size sibone ukuba abanye babelana iimvakalelo zam efanayo malunga ngomtshato “uhlanga”, inkosi ikusikelele!
jason • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 10:35 mna • impendulo
1 Samuel 16:7…INkosi abagwebi yi intliziyo, ngoko kutheni dont thina? Kufuneka wenze oko uYehova uthe standard yethu, Inokundenza ntoni na inyama yethu ufuna / azazi imigangatho yeli hlabathi. Kule meko, ngokwembono yomntu, umgangatho inkosikazi IMizekeliso isahluko 31, hayi ibala lesikhumba / hayi umgangatho yehlabathi ngokutshata ngaphakathi yakho “uhlanga / ngokobuhlanga.”
tabby • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 11:20 mna • impendulo
dude ukuba mihle!
tony • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 11:31 mna • impendulo
Ndiyabulela kungenxa yokuba ndibindekile Afrika American kunye nomfazi wam kokufika. uhlanga lakhe ze into kum, ngenxa yokuba intliziyo yakhe ngenxa iNkosi. Ngoku umntwana oyintombazana. Xa ndijonga umfazi wam kunye nentombi andiyiboni umfazi kokufika, okanye usana ingxubevange. Ndibona nje iintsikelelo ezimbini ezinkulu ebomini bam (ngaphandle eNkosini uYesu). Maxa wambi ndiye nokuba silibale ukuba isibini exube kunye nosapho. Akukho kanye lula lonke ixesha ngenxa yabanye abantu, kodwa ke ukuba kuyo nayiphi na enye indlela. Yanga iNkosi ingaqhubeka wena kunye nosapho lwakho ukuba asikelele!
Andrew • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 1:09 pm • impendulo
uhambo, ndiyabulela kakhulu kangangokuba le. Ndiyavuya amhlophe, kwaye ukusuka Cincinnati nalapho i ndakhulela mna ngokuqhelekileyo elimhlophe itakane kuphela kwi ibhloko. umfazi wam ukuba akhuliswe eyahlukileyo ngokupheleleyo. yena wakhulela emaphandleni Nebraska njenge Mexican. Andikwazi ukuqala ichaze amanye amabali uza kumxelela ukuba yena nabazalwana bakhe bakhuliswe ngenxa inzondo, engaguqukiyo, kwaye iflethi nalwazi ebantwini ekhula kunye.
Waye wafudukela Nathi ukuba abe kufutshane nam. Waye wafudukela apho ndicinga ukuba kwakunganyanzelekanga ukuba ndininyamezele, ukuzwa, abazi izinto wenyukayo ngenxa yokukhula. Wowu, baba thina sobabini woma! Izinto abantu bathi nathi mall, epakini, okanye nje ukuba badle. Ungacinga nathi kwi show, “Ungathini.” Kwakunzima, uthando lwethu basigcina strong, abahlobo zethu emva kwethu, noThixo wethu basigcina ndawonye.
Ngoku sele nditshatile 11 minyaka 4 abantwana amahle ukubonisa kuba. Kwakhona Ngoku uhlala kuloo dolophu yasemaphandleni encinane enye indawo akhulela. Le inzondo ngaphantsi, kodwa kubukeka kusekho. Eyona nto sisoloko sithi / ukwenza nanini na xa usiva le “ukuhlaselwa” siphakamisa abo “ngokuhlasela” nathi ngomthandazo. IBhayibhile malunga umthande utshaba wakho njengoko uzithanda ngako, Nokuba endingacingi aba bantu ukuba babe iintshaba zam, ingqiqo sibhalo isenguye.
uthando, kufuneka ukuba ubonise wonke uthando thina nje. Enoba uhlanga okanye imvelaphi yomntu, UNkulunkulu uyabathanda, kwaye ukuba sifane noKristu, ngoko nathi ukuba siyabathanda.
yokususa • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 1:58 pm • impendulo
Wonderful sihloko Uhambo lee. Ke i ndiseyilaa single kodwa ekubeni i yabe imbalwa i waba nomdla ngokutshata umfazi omhlophe kuba ezimbini oomalume bam watshata abafazi abamhlophe. Xa i usindiswa i Andibonanga umahluko phakathi abamnyama okanye mhlophe kodwa logama nje abaqhuba Ukholo efanayo.
Andrew Almond • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 2:39 pm • impendulo
Wonderful post Uhambo. Ndiye ndizame nzima kakhulu kutshanje imibuzo ukuthandana efana ngubani I kufuneka uqalise ukuthandana, kwaye xa, nokuba kutheni, nendlela ukulindela kuThixo konke izinto kutshanje, yaye le posi banokuqonda kakhulu. enkoso ngokwabelana.
Jenna • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 2:43 pm • impendulo
post Wonderful! uhambo, unentsapho elihle, kwaye Ndiyabulela kuwe kuba ngokwabelana intliziyo yakho. Nangona nomyeni wam yaye ke bobabini amhlophe, Sikhule ngokwahlukileyo kakhulu. Yena a lokwenyaniso inkwenkwe lizwe nokuzeyisa wavakalisa redneck. Bendisoloko waziva bekhululekile ngakumbi phakathi kwabantu abamnyama, kanye njengokuba umntwana. Mna zange kuthelekiswa ngokutshata umntu omhlophe, kodwa ozikhethayo bam ngokuqinisekileyo ekuzuzeni amadoda inkcubeko hip-hop. Abantu badla bebuza ukuba sagcina ndawonye, kunye nabantu abaninzi wothuka ukufumana phandle indoda yam emhlophe. Yena koko kaMqhayi kuba mna yokukhula, kodwa yonke into ezifunekayo indoda notata for kids zethu. UYehova wayisikelela imigudu yam, kwaye Andikwazi ukucinga ubomi bam nayiphi na enye indlela!
Khankanya: List | Relationship Resource Kit
RG • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 3:31 pm • impendulo
Akusayi intliziyo okanye imiyalelo yakho, kodwa yintoni uThixo Icetywe / ezithandwa. Iyamangalisa indlela ngolwalathiso kaThixo kutyhilwa. Mna Native American ngubani wakhulela ugcino kunye nomyeni wam Mexican. Sobabini wakhulela States ezahlukeneyo kodwa thina sakholwayo enye iNkosi uThixo athandileyo apho wayefuna ukuba simkhonze yena waza wenza ilungiselelo lokuba sikwazi ukuhlangabezana. Ngoku uhlala kufuphi ugcino isekwimo ekhaya. Ndathandaza (njengomKristu entsha xa eneminyaka 8) ukuba uThixo wayeza kusebenzisa nam ecaweni yam ekhaya ndize mna soze ndiyazi ukuba uThixo uza kukhula kum ibe ngumfazi zobufundisi eli uthe ibandla! kanti, Ndivuya basikelelwe ukwazi ukuba enamandla lo Thixo owadala ihlabathi ukusebenzisa ukuba ukubonisa amanye uthando lwakhe olukhulu, nobabalo. Ukuze eze kanye kwicala nomyeni wam ngumncedi bakhe ukushumayela iindaba ezilungileyo kubantu bam.
Oku kukhuthaza kakhulu kum. Kwaye yinto enkulu ukuva indlela uThixo ukutshintsha intliziyo ukwenza ukuthanda Kwakhe! Qhubeka ukuze enze umsebenzi wakhe!
Siyabulela ngokuba iingoma kunye inyaniso nifaka. usapho lwethu uyawuthanda umculo wakho. Ingakumbi noonyana bam elivisayo.
halfNhalf • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 3:32 pm • impendulo
Umyeni wam Mexico, kwaye mna bakwiiPhilippines. Ndiyazi 3 iilwimi nokufunda ngakumbi ezimbalwa. Umhlobo wam osenyongweni ngu abamnyama kunye nomyeni wakhe Arabhu. Kuyamangalisa ukubona umxube iintlanga kwi amabandla kunye namaqela.
Thina ngenene ukukhangela nje kwisiqulatho lemo omnye. Yinto zicocekile ukufunda iilwimi ubone zonke iinkcubeko amahle. In uKristu akukho umYuda, IsiGrike, Ndoda female.
Matt • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 4:06 pm • impendulo
Enye ngaphezu kwam iintloni “ezikhethwa” ekhangela kokusemva yayikukuba umfazi wam ukuba Denver Broncos fan.
Okuvuyisayo, UThixo wavumela ukuba ukukhula ekuvuthweni ngaphambi wazisa stunner yam kum.
Maria • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 4:13 pm • impendulo
Ndiyavuya amhlophe, Ndaye ndamitha, unyaka wokuqala esikolweni unyango kunye we- umntwana omnyama. Kwiinyanga ezintathu ekhulelwe, UThixo undithume umhlobo – indoda brown Indian. Siye bobabini ukuqala nje imisebenzi yethu kwisikolo sezonyango. Oko ndandiza kukwenza crazy ngokwaneleyo ukuba. Xa waxelela abazali bakhe ngam ukuba isabise yonke inkxaso, abazalwana bakhe wala ukuthetha kum. Emva konyaka onesiqingatha satshata sisese esikolweni, yokukhulisa unyana wethu kwaye yedidayo abantu. UThixo kakuhle, kwelinye lawona maxesha anzima ebomini bam, nguye owandiwisela umhlobo, indoda enobuthixo, kundithanda, konke okwam, mna + baby. -Heres, ukuba indoda yokwenene. -Heres, ukuba uBawo onothando kakhulu nobabalo.
Aleshia Robinson • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 4:48 pm • impendulo
Oku ukuzenzisa kodwa xa ndibona isibini ukutshatana esidlangalaleni ndicinga nto ngayo ngaphandle xa ndibona umntu oMnyama nentombazana non-Black. Andazi ndothuke ukuba vice versa kodwa ndiyazi ukuba, ukuba umntu oMnyama kule eluntwini kuba nzima ngaphezu kakhulu. Ndandidla ukusebenza ehotele ecaleni abantu abamnyama kwaye ngelixa iindwendwe endiphatha ngentlonelo kwaye bakholwa ndingenza umsebenzi wam ngabugcisa, ukuba wenze i iswitshi ne Black osebenza nabo zam phambi kwam. I ukukhulula iitawuli egumbini lwabo kodwa abamenyiweyo ukuba ukuvula umnyango kubo. Ndikwazi khangela iindwendwe nge lula kodwa babuzwa “andaz. Ngaba ucombulule le?” Ndide ndibe nako ukumthintela ngaphandle kwi lekhefu ngaphandle usamkhathazelani kodwa amapolisa wayeka ukuba babuze “Yintoni guys oyenzayo?” Abantu kubagweba aphathe amadoda Black ngokwahlukileyo kwaye nam andikhange ndicinge ukuba kutheni. Ngoko xa ubona umntu oMnyama nabani na omnye, Ingcinga yam yokuqala “Yena uzama ukwenza ubomi lula ukuwenza.” Ingcinga yam yesibini “Ufuna abantwana bakhe ukuba iimpawu zakhe.” kodwa hey, ngubani na ukuba ndigwebe? (Nakuba na) Ndiya kakhulu ukutshata ngaphandle uhlanga yam ngenxa UTHANDO yam adventure kunjalo ofana ndathi ekuqaleni, le ngongoma nje ngqo yokuzenzisa. Okungenani utshatile wakho ngenxa yezizathu ekunene.
Lynn Burgess • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 7:06 pm • impendulo
Ndiyayincoma Uhambo & Jessica Lee. Ukuhlanganisa ibandla bokwenyaniso bakaYesu Kristu nomtshato 'exube "phakathi ibandla eli impendulo ubuhlanga kwinkcubeko yethu. Inye kuphela uhlanga, uhlanga lwesintu, "Umntu oyindoda kwakunye nomntu obhinqileyo ..." (Genesis 5:2i), kwaye ayikhe umbhalo ukutshata abo yakho ibala efanayo okanye imilo amehlo.
Tiona • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 8:14 pm • impendulo
Enkosi inqaku! Njengokuba umfazi omnyama olunye othanda uThixo ufuna ukuphila ubomi bam ngendlela emkholisayo kwaye ibonisa uthando lwakhe kwabanye, Mna ndikhungile nzima ngale sihloko. ubukhulu becala Amadoda single ezicaweni ndiye ndaya kuye amadoda non-abamnyama. Ngamanye amaxesha ndiye ndizive ngathi mna emazantsi esibondeni totem, ekhuphisanayo nxamnye abamhlophe, abafazi Asia and kokufika nge elide, iinwele kunye neempawu elibaleka ukuba akasoze abe. Naxa ngokukhangela ngapha kwezinye iisayithi ukuthandana lamaKristu, Ndiye ndaphawula ukuba ipesenti enkulu yabantu kunye profiles ongqindilili abonisa ukuba banomdla phantse zonke ethnicities ngaphandle African-American.
Inqaku lakho kwasikhuthaza kum kwaye ibala. Ndiya kukholosa uThixo ukunika kuzo zonke iinkalo zobomi bam, kuquka budlelwane. Enkosi!
Enkosi ngokunyaniseka kwakho!
Umakhulu • EyeNkanga 1, 2013 ngexesha 10:31 pm • impendulo
abaninzi, Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xa unyana wam omdala malunga 2, sihamba ngemoto ngokusebenzisa icandelo abamnyama wedolophu waza waphawula ukuba bonke abantu abamnyama kwaye wambuza kutheni ke bonke abantu abamnyama. Ndazama ukuchaza ukuba kudala abantu bacinga ukuba ngcono ukuba bonke abantu abamhlophe abahlala kummandla omnye wahlala bonke abantu abamnyama kwindawo enye. Kananjalo wathi ngoku siyazi ukuba akwenzi mahluko into umbala ulusu lwakho. Emlonyeni weentsana……uthe, “yeah, into ebalulekileyo kukuba sifika isikhumba!”
Jays_Page • EyeNkanga 2, 2013 ngexesha 12:56 mna • impendulo
umzalwane wathi kakuhle.
ulalele ndekai • EyeNkanga 2, 2013 ngexesha 3:32 mna • impendulo
yonakalise umfazi uThixo owoyika na wena best unako ukukwenza ukuze intsapho yonwabe. kahle uhambo into ofuna ku abafazi ibaluleke ngaphezu koko kufuneka ikhangeleke ngolu.
Khankanya: NgoMgqibelo Memezani-outs: SBTS, Ukuyiyeka Straight, & Ministry Links | H.B. Charles Jr..
Kaila • EyeNkanga 2, 2013 ngexesha 4:19 pm • impendulo
Ndiyakuthanda ukuba zivulekile yaye sinyaniseke le post. Ndiziva ngathi kwisenzo ukutshatana kunye naye kuyindlela abantu isihloko kuyimfuneko kuba lula ukuxoxa kuba kwizizukulwana ngezizukulwana ndiziva ngathi abantu athe wampompoza nayo. Ukusuka ingongoma yam imbono ndicinga ukuba Intle ukubona uthando alunamkhethe njani.
Kodwa ndiyacinga kwakhona phandle bam kungenxa bendisoloko wakhulela ekuhlaleni apho kwakungekho uhlanga nje omnye kunye nabazali bam zange wamvusa ukuba ungathandi nabani ngenxa yebala labo. kodwa, Mna ukubona ezinye nikunqena unyaka wam wesibini xa ndathabatha umhlobo wam osenyongweni, ngubani mhlophe, ukuba ococek kuba umakhulu wam ozala ayikho uwuthandayo abantu abamhlophe. nokuba, asabela akazange ukutshintsha ingqondo yam malunga ngubani ndimelwe okanye akufanele umhla.
Andizange ukuthanda oko uhlanga nje sinokutha-. kodwa, xa usapho lwam wafumanisa ndiyathanda- yaye emnyama, amangala. Amangala ngenxa yokuba intsapho yakowethu sele ehlala kwindawo emhlophe predominately ngenxa elidlulileyo 10 iminyaka kwaye babecinga ukuba nekuthiwa ubuhlobo bam.
daniel • EyeNkanga 2, 2013 ngexesha 4:43 pm • impendulo
Esi sithuba ezikhuthaza. Umfazi lwam luyadlubhuka / El Salvadorean. .. kwaye mna ndiyindoda Korean…. It alwaziwa ngokupheleleyo kwinkcubeko Korean ukutshata ngaphandle yohlanga yaseKorea singasathethi / umfazi omnyama latina. Njengoko isibini engaqhelekanga ukutshatana siye senze okukhulu, kodwa eyona nto yayibalulekile lalinguye uKristu nokuzikhanyeza yethu uKristu ubuhlobo ukuba ngokuthandana ngoku emtshatweni wethu.
Andizange ngokwenene iposi kwizinto ezifana kodwa le post wathetha kum, ndiwazalise ukuzimisela kwam kwindlela kwibhunga kwabanye abakulo ekulandeleni ekufumaneni umlingani yohlanga lwabo.
kevin • EyeNkanga 2, 2013 ngexesha 8:12 pm • impendulo
Ndicinga oku ibali emangalisayo. Ndiyakuthanda indlela ngaphaya kwakho ngenxa yokuba ixesha elininzi kuthi sizame ukufihla izinto ezifana kukhetho abafuna, kodwa i love you wathi indlela kufuneka ukuba ziwangenise. Ndiyathandaza ukuba uThixo usaqhubeka ebonisa izinto ezifana oku kuba ndiyakholwa ngokwenene ukuba kuya kukunceda ukuba ugcine intliziyo yam namehlo kuThixo neLizwi laKhe, hayi nje nokubonakala abafazi ngeenxa zonke kum.
JoeyE • EyeNkanga 4, 2013 ngexesha 9:01 pm • impendulo
Umfazi wam zange ndicinge ndimbuza atshate i Yankee, kokufika, umJuda owayengumKristu. Ndiyavuya yena wenza. :)
MJ • EyeNkanga 5, 2013 ngexesha 1:18 pm • impendulo
ogcwele! Kunawe ngokwabelana ibali lakho uthando. ulutsha, abafundi beekholeji kunye nabantu abadala ezintsha ziyaswela lithemba imizekelo enjalo! Ndiyazi ngokuba sisiba udubulo bethetha ngesini, dating kunye nobudlelwane kunye nabo ukususela 2003. nakanjani ukuba ukwabelana nabo https://www.facebook.com/FMUniversity.
inkosi ikusikelele, uhambo!
zacharybrunotte • EyeNkanga 6, 2013 ngexesha 6:19 pm • impendulo
Ndingu indoda emhlophe kunye nomfazi black. Nangoku kunyaka wokuqala, ukuzisola kodwa akukho! Thina umntwana wethu ngenqindi endleleni yaye sibathanda usapho wethu omncinane. Uhambo Like Lee, I umfanekiso ngokwam ngokutshata umfazi ngokobuhlanga yam (Ndicinga yayo yemvelo nje). Kodwa andizange nakanye imibuzo okanye bacinga ukuba “kunene” okanye “engalunganga.” Yena ungokaThixo. Thats kuphela kogqatso ndijonga!!
NTOBEKO • EyeNkanga 7, 2013 ngexesha 2:01 mna • impendulo
Amen omnde, kumdumisa uThixo ngenxa iyantlukwano ubabalo noxolo.
olusebenzisanayo • EyeNkanga 7, 2013 ngexesha 8:51 pm • impendulo
Wena wifed naye? olusebenzisanayo, ongakwazanga wathi watshata?
Jenn • EyeNkanga 7, 2013 ngexesha 9:50 pm • impendulo
Ndikhumbula xa wena Jessica eqala ukuthandana! I zisala bayakhuthazwa ukuba ukukubona ezimbini kuqhubeke sinobabalo lukaThixo. Le blog enkulu kwaye ndicinga ukuba ukuba akhulule abantu abaninzi njengoko ukhetha ukujonga intliziyo yomntu kunokuba olungaphandle.
Khankanya: Iimbalasane Reading: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
Joel • EyeNkanga 12, 2013 ngexesha 4:25 pm • impendulo
“Baleka nzima yaye nkqi ngokubhekiselele Msindisi kwaye xa ubona umntu, kwikona lweliso lakho isebenza kwicala elinye, kufuneka uthathe ujongo yesibini”
Rachael • EyeNkanga 27, 2013 ngexesha 4:08 pm • impendulo
Ndiyithanda kakhulu le! Ndiza ukwabelana oku nabazali bam. Abazali bam baye imiba nesibakala sokuba ndizibona nomdla guys bolunye uhlanga. Nangona abasoloko sele nomdla kwi guys kakhulu uThixo, kubekho amaxesha xa ndinomdla indoda kakhulu uThixo, kodwa ngenxa yokuba ongekho mhlophe abazali bam ugxothiwe ngokupheleleyo yaye wayesalela naluphi na uhlobo lolwalamano nabo. Mna ngokuqinisekileyo ukwabelana nabo, ngethemba oku kuya kuvula amehlo abo.
Tasi • EyeNkanga 30, 2013 ngexesha 11:15 pm • impendulo
Ubhuti, amagama afana ubudlelwane ukutshatana kufuneka athathwe ngaphandle vocabs zethu. Inye kuphela uhlanga lwabantu.
Maurice • EtiMnga 6, 2013 ngexesha 2:59 pm • impendulo
Ungaze wabona ukuba indlela. Andikho ngokobuhlanga, kodwa ukukhula kwam phezulu, kwakukho ngcamango ke wasifundisa kwinkcubeko yethu wayebonisa ukuba amantombazana amhlophe ndikuthanda kuphela, uluthiye usapho lwakho. Bayakuthanda ukuba zivalwe ngo. Ngoko nomkhulu kudala “ukuba uyafuna na ukuza emtshatweni wakho okanye ukungahlawuli nina utyelelo ekhaya lakho, atshate intombi emhlophe. Ngokuba akayi kuvumela ukuba ukufumana kusondela kuni.”
Abby • EtiMnga 9, 2013 ngexesha 2:55 pm • impendulo
Ndiyavumelana uhambo lee
Ndicinga ukuba xa umthanda kakhulu uthixo uyakuvumela Ndithi kutheni kungenjalo
Ndicinga ukuba isicwangciso uThixo ukuba ukuhlangana Jessica !
Abby • EtiMnga 9, 2013 ngexesha 2:56 pm • impendulo
BTW ndiyamthanda uhambo lwakho umculo lee
Khankanya: blog pan – 12/13/2013 :: Carey Green - yokudidiyela podcast, umbhali, uSomlomo, entrepreneur, umshado & umqeqeshi ekhaya, kunye umlandeli inkanuko kaKristu.
Livy • EtiMnga 17, 2013 ngexesha 9:23 pm • impendulo
Iyahlakesi. Ndiyavuya amhlophe (yingxenye kokufika, kodwa akukho namnye uya kwazi ngokujonga kum), kunye nomyeni wam emhlophe, kodwa nguye evela kwilizwe yaye mna esixekweni. Nguye ukusuka ezantsi, kwaye mna ukusuka emantla. akunjalo OLUFANAYO kuba nje ngezandi zethu isikhumba ziyafana. kwaye intetho kunye nenkqubo izinto Sihamba kwi izantya ezahlukeneyo, kunye neentsapho zethu azifani ngokwenene, kodwa siyabathanda abanye, uThixo wenza ndawonye. amasiko, nangona, kuthatha uhlengahlengiso ukuba sobabini. ukuba, kunye nokuba ngedyokhwe ukukhonza uYehova ngokulinganayo, oko umtshato konke malunga! Ndiyavuya wakhuluma!
Teboho Sekhosana • EyoMqungu 13, 2014 ngexesha 5:47 mna • impendulo
UThixo wethu Awesome wasidala ngokomfanekiselo wakhe OngowaKhe,ngoko umbala ayitsho i thing.Love kuni umzalwana wam
Corina • EyoMqungu 19, 2014 ngexesha 11:40 pm • impendulo
Elo bali kakhulu elihle………ingakumbi umfazi wakho…guys ubusiswa. …AMEN ibali ur! !!!
uDonald • EyoMqungu 25, 2014 ngexesha 7:17 pm • impendulo
Amanda • EyoMqungu 26, 2014 ngexesha 9:16 pm • impendulo
uhambo! Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, umculo wakho mhle nezoyikekayo idolo. Ndiyakuthanda umyalezo ushumayela ngamnye ingoma eyodwa. Qhuba italente emangalisayo uThixo uninike! ubudlelwane ukutshatana kunye imitshato ngokuphelele langa. Kufuneka Akukhathaliseki ukuba esinye isizwe, kodwa abafana nawe wathi, iqabane lobuthixo. I am abaseAfrika, kodwa baye batsalwa Afrika American ubomi bam yonke. Usapho lwam kakhulu, kakhulu, ukwamkela kakhulu le. :) nokuba, Ndiyathandaza ukuba uThixo uthumela kum ekunene, lowo manene neempawu ezifana nezikaThixo. Ndilangazelela ukuba umntu uthi bethanda uKristu ngaphezu kokuba niyandithanda, ehloniphekile, nokumnandi. Oku uvule amehlo am nangona ukuba kuvuleleka kuzo zonke iintlanga kunokuba nje abamnyama. UThixo Sikelela wena Jessica!
Terrice • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 11:39 mna • impendulo
Oku inqaku olukhulu… i ngokwenene ukufunda blog yakho. Enkosi ukwabelana amabali akho sibonakale kangaka. UYehova usebenzisa wena ngeendlela ezininzi ezimangalisayo! inkosi ikusikelele!
ski • EyoMqungu 29, 2014 ngexesha 9:55 pm • impendulo
Wowu, eli nqaku mihle! Uzuko kuThixo! uhambo, wena umbhali elungileyo ngokwenene ngokunjalo. Ndaziva ngathi mna efunda romance inoveli okanye into ngexesha ufunda iposi yakho. Baninzi bencumile eholweni yaye “awwwwww!” LOL Siyabonga ngenxa yokuba nempembelelo uThixo izimpi ezininzi kangaka.
LeisleyAbrahams • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 2:41 mna • impendulo
Siyabonga Trip yiloo ndlela uye wachazelwa ukuba angaze!!girl friend yam mna uthandaza kwaye ebilindile iNkosi step.I'm elandelayo imibuzo uhlale abamnyama ngokupheleleyo blonde Afrika white..I'm Yena ngolu i uthanda yaye amantombazana ulusu lwam kodwa ndiyabona umfazi lobuthixo ngomlilo uYesu kuye, Loves uYesu ngakumbi kunanini uya uyandithanda kwaye into abayifunayo life..You wam siphefumlelwe ngokwenene kum #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
Khankanya: Morning ngewebhu 01/31 | Matters Theology
Aprilci • EyoKwindla 3, 2014 ngexesha 8:41 pm • impendulo
Ndiyavuya ngenene ukuba wathabatha ixesha ukubhala le. Esi sithuba hlobo random, Andizange ndicinge ngayo (Yingxaki enjali le, Andizange bazi eli phepha yayikhona kuze namhlanje). Na lyo line, Ndiyavuya wabhala kuwo…Ndicinga inxalenye ebangele umdla yam kakhulu umba kukhetha yonke. Ndanditshatile indoda ngenxa 5 kwiminyaka (si 3 abantwana ndawonye) abangazange wayengafuni ukutshata kwakhona kuba ngamazwi akhe—I wayengekho ngokuthanda kwayo (wayesoloko wayeza kusebenzisa itshokolethi ice cream / vanilla ice cream umfanekiso ukuzama ukuzanelisa–ngokuthanda kwayo kwakukho umfazi enehlala eh….”intle” umzimba–Ndiza kuyishiya ngelo). Into crazy wenza rap yobuKristu—(????). Ngenye indlela, Ndiyavuya ukubona ukuba wahamba ngendlela efanelekileyo—ngokubeka iminqweno kaThixo ngentla kwiminqweno yakho yenyama…..Ngenye indlela, ukuqhubeka Ukuthanda umfazi wakho njengokuba uKristu Uthanda iBandla….Ndiza kuhlala nonke emithandazweni yam…..
College Companion wakho • UTshazimpuzi 17, 2014 ngexesha 5:49 pm • impendulo
Ngokuqhelekileyo andithanga ukufunda inqaku kwi iiblogu, kodwa ndinqwenela ukuthi le sibhalele-up kwanyanzeleka kakhulu ukuba jonga kwi wenze njalo! indlela yakho yokubhala iye bamangaliswa me. Enkosi, post nice kakhulu.
EZINYE • EyeThupha 31, 2014 ngexesha 1:45 pm • impendulo
Yep. sizathu esifanayo i watshata intombi emhlophe. Enkosi ngokwabelana. ukufunda. inyathela wafaka. UThixo akusikelele wena umzalwana usapho lwakho. Dumisa inkosi, tho foreal.
Tgirl • EyeNkanga 22, 2014 ngexesha 9:24 pm • impendulo
kakuhle, Ndicinga ukuba abantu wothuka ngakumbi ngenxa yokuba amadoda ambalwa KAKUHLE abamnyama basetyhini umfazi kuyala White kwaye thina abafazi abaninzi abamnyama. Yinto ebuhlungu ukuba zikho izimvo ngokobuhlanga, kodwa nje abantu indlela abavakalelwa, ingakumbi, abafazi- ukuba Black. I babe nemilinganiselo double boyfriend yam Latino & Ndivuya Black kwaye ilungile (ukuba abafazi abamnyama ukuya kumhla ngaphandle yohlanga lwabo). Kwelinye icala, xa ubona ehloniphekile (leyo zimbalwa kakhulu) Indoda ezimnyama ngumlungu / Okunye umfazi, Ndibe dang enye omnye wabazalwana bethu bemkile…ngoku, uthetha nje ukusuka ubuhlanga entliziyweni okanye. yilento iyiyo.
Khankanya: A Married Man | sephephandaba
Jeff • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:05 mna • impendulo
Hey Uhambo, enkosi impendulo egqwesileyo olucingisiswe kumbuzo enzima. Ngathi andiyi izingela nawuphi na umfazi xa ndadibana Michelle. Wayesele ekhoyo kwaye iyafumaneka kwaye sabona ihlabathi ngeendlela ezifanayo. uhlanga lwethu Asiyo nto ezahlukeneyo ngathi nokholo lwethu IS into ezosilethela ubunye. I yomhla kuphela yaye wayezeke abafazi abamnyama ndatshata ngakumbi kuxanduva (umntwana) nolindelo yenkcubeko ngaphezu umdla ofanayo. Ekubeni kwakungekho nolwalamano noThixo bucala utyelelo ecaweni athile Ndiyakholwa wayegula ukulungele ukutshata. Nangona ibala lethu ulusu efanayo saba amaxabiso ezahlukeneyo kwaye emva kokuba wazahlula nesowaliweyo uThixo wangena entliziyweni yam eyaphukileyo ukuba Ndiphilise. Ndinombulelo kuba nesibindi umfazi wam ukuba sijonge amandla kwaye yam ngaphambili am kwaye uyandithanda ngaphaya ibala lolusu. abantwana bethu nobulungiseleli ecaweni yethu iya kubonisa uthando lukaThixo abantu kuzo zonke yokuhamba zobomi. Ingongoma uBukumkani njengoko balingana ehlabathini noYesu iNkosi yabo bonke.
Jeff • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:39 mna • impendulo
Hey Uhambo, enkosi impendulo egqwesileyo olucingisiswe ukuya sisihloko esinzima. Ngathi andiyi izingela nawuphi na umfazi xa ndadibana Michelle. Wayesele ekhoyo kwaye iyafumaneka kwaye sabona ihlabathi ngeendlela ezifanayo. uhlanga lwethu Asiyo nto ezahlukeneyo ngathi nokholo lwethu IS into ezosilethela ubunye. Kwixesha elidlulileyo bendithe yomhla kunye watshata abafazi abamnyama ngaphandle ngembopheleleko (umntwana) nokulindela namasiko (usapho) aluyomvakalelo mutual. Ekubeni kwakungekho nolwalamano noThixo phesheya ukuya ecaweni, I ukuyiphendula ukuze umtshato. Nangona ibala lethu ulusu efanayo saba amaxabiso ezahlukeneyo kwaye emva kokuba wazahlula nesowaliweyo uThixo wangena entliziyweni yam eyaphukileyo ukuba Ndiphilise.
Ndinombulelo kuba nesibindi umfazi wam ukuba sijonge amandla kwaye yam ngaphambili am kwaye uyandithanda ngaphaya ibala lolusu. abantwana bethu nobulungiseleli ecaweni yethu iya kubonisa uthando lukaThixo abantu kuzo zonke yokuhamba zobomi kunye nemfuneko bethu kakhulu ngenxa yesisa sakhe. UBukumkani balingana ehlabathini uYesu njenge Nkosi zonke iintlanga. Siza Sithandazela ukuba usapho lwakho kunye nceda uthandazele ukuba nathi.
Kennedy • EtiMnga 18, 2014 ngexesha 2:13 mna • impendulo
Ndathelela uhambo I sicinge ndingafumana umntu njengoko abathile site ngenxa lieying yaye ephanga abantu ndabe ayetyeshela sms ethile equlathe emails kodwa u andinako ukuzisindisa icebo likaThixo ngaloo ofana umdla kum i ndiyifunda ukuba umva umgaqo yam na apho ondithandayo kodwa hayi kuphela uhlanga yam ke ndafika lady emhlophe American abangazange abakhathalele uhlanga,inkcubeko kuphela umntu uthando & siyakhathala ngaye “ngubani na me” uThixo zonke kunokwenzeka ngokwenene lam.
Kennedy • EtiMnga 18, 2014 ngexesha 2:19 mna • impendulo
Ndathelela uhambo Andizange ndicinga nga ukufumana umntu onyanisekileyo njengoko abanye site ngenxa nesabasilaleleyo inkunzi nabantu mna ngoyaba ezinye sms equlathe emails ukuba uqhagamshelane nabo kodwa u andinako ukuzisindisa icebo likaThixo oku ngathi umdla kum mna ukuyifunda ukuba abamnyama nkqubo yam na apho ondithandayo kodwa hayi kuphela yam uhlanga ke ndafika lady emhlophe American abangazange abakhathalele uhlanga,Culture njl… umntu kuphela umntu unelungelo & siyakhathala ngaye “ngubani na me” uThixo zonke kunokwenzeka ngokwenene lam.
Ryan • EtiMnga 27, 2014 ngexesha 1:43 mna • impendulo
Endithandana intombazana ethanda guys abamnyama… kwaye mna ezimhlophe. Yena iyasiqinisekisa ukuba yena uthanda me a lot, kodwa iseyi ukungakhuseleki enkulu kum. Kodwa ndithemba ukuba ngenye imini atshate le ntombazana. Ngaba ikho into ukufunda ngalo mba okanye naluphi na uhlobo ingcebiso?
Mleshia • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 11:37 pm • impendulo
Ewe uhambo! Mna ndingumfazi omnyama abangatshatanga eyunivesithi emhlophe predominately yaye olu hlobo incoko njalo iza phakathi kwisangqa yam owayeyintombi abamnyama. Nangona mna iinketho for abantu abamnyama (Mna zonke ngenxa yothando omnyama), Ndisoloko vula ukuya uthandana ngaphandle yohlanga yam kuba soze ukwazi ukuba uThixo unako ukusebenzisa ukwenza umahluko ebomini bakho. Ndibona abantu abayi- zisekelwe ubuntu babo, uphawu, izimiso zazo, yaye iinkolelo zawo ngaphezu nantoni njengoko obuyenza ndakufika ndicela ukwazi ukuba. Looks ibalulekile kwaye kukho iimeko ezithile zentlalo ezinokuthi kuqondwa ukuba nezinye wakhulela inkcubeko ezahlukahlukeneyo, kodwa ke ezi zinto azikho dealbreakers. ukuba ke kukho nto, ukuba uza kwenza ubuhlobo ezinomdla kakhulu. Ibali lakho libali uthando entle nam onethemba ngamhla. Konke kwinto enye, awukwazi ukunceda wena ukuyithanda, kungakhathaliseki ukuba emnyama, mhlophe, lubhelu, Barney purple, okanye Ninja Turtle eluhlaza. Uthando jikelele kwaye kuko konke ethnicities. Thina njengamaKristu ebekumele ukuba ukuthanda yonke nokuba linye zethu. Ngamanye amaxesha naye umphefumlo wakho, umdlalo lokwenyaniso, naye ukuphila, kunye best friend ngumntu malunga ngokupheleleyo ngubani Wakhe wacinga ube ne. Loo nto indenza ndincume ukuva ukuba esentlungwini njani batsaleleke uJessica abalungiselele abalulamileyo, onobubele, uThixo aboyika umfazi ukuba yayiyindlela. umtshato wakho umnqophiso wenene ukuba ukholo lwakho ekwabelwana kuThixo kuko konke umahluko. Usikelelke.
uphawu • EyoMdumba 22, 2015 ngexesha 3:17 mna • impendulo
Hey, ndiyakuvela. Mna nelifa Aboriginal Australian yaye ndisoloko ndifuna ukutshata omnye Koori (Aboriginal) kodwa ngenxa yokuba inkcubeko kunye izinyanya iinkolo oku kwakusenzelwa ukuba kube nzima kakhulu. Ndaphela ngokutshata intloko Anglo Red. Kodwa uthanda uYesu yaye yiloo nto ibalulekileyo.
uIsake • UTshazimpuzi 9, 2015 ngexesha 11:50 pm • impendulo
Hayi, uyolo ukwazi ndingenguye kwi lwengoma engalunganga njengoko ukusondela ixesha ndiya kwenza ukhetho kwi naye ukuphila!
jamel • EyeKhala 12, 2015 ngexesha 9:17 mna • impendulo
cece • EyoMsintsi 24, 2015 ngexesha 3:56 pm • impendulo
UThixo akusikelele wena kunye nosapho lwakho egameni likaYesu akunamsebenzi oko kuyivusa ukuba ibalulekile phezu babaphatha njani na kwaye umfundisi bubhetele yokwenene
Ezra • EyeNkanga 6, 2015 ngexesha 3:17 pm • impendulo
"Yaye xa ilanga besisihla, ubuthongo obukhulu phezu uAbram; kwaye, ngayo, luvalo lobumnyama obukhulu phezu kwakhe. Wathi kuAbram, Yazi ke, ukuba imbewu yakho iya kuba ngumphambukeli ezweni elingelayo, ibakhonze abo; kwaye baya iminyaka engamakhulu amane bayicinezele; Kananjalo uhlanga, kubani na ukuba ukukhonza, ndiya kulugweba: emveni koko iya kuphuma ineempahla ezininzi. "
Ngokutsho INgoma yazo iiNgoma 1:4-6:
"Ndimnyama, ndinomkhitha, Zintombi zaseYerusalem, njengoko ngasezintenteni zakwaKedare, njengoko nemikhusane kaSolomon. Jonga phezu kwam, ngokuba mna abamnyama, ngokuba ilanga wakukhangela phezu kwam: kubantwana bakama baba nomsindo kum; baza bandenza umgcini izidiliya; kodwa isidiliya ezizezam na igcinwe. "
Ngokufanayo Numbers 12:10-15 ithi ukuba Mariam uqalekisiwe nguThixo xa idelela umprofeti wakhe, Ngaloo ndlela Mariam Ndixuthwe nombala okanye umbala ukuba simhlophe njengekhephu. Indida lwesi sakhi kukuba amaKristu nambulala iinkcubeko yonke kunye Caucasians babanga ukuba i bakhetha abantu, xa iBhayibhile yincwadi Hebrew malunga uThixo umYiputa lowo ikhankanya ukuba amaSirayeli / uYakobi wamzalela 12 amadodana wavelisa isizwe kaSirayeli abamnyama, efana onke amalungu umnombo Holy.
Ndiyazi endinguye. Kwaye andiyi mna ngokuchaseneyo nabantu Nubian ukuthandana / ukutshata abantu abamhlophe. Andinakuze ndiyenze, kodwa ikhawulezisa nje inkqubo, ukuze ukuthula ilifa Umhlaba endaweni into banyamezela ngoku.
Nathan Yonas • EyeNkanga 26, 2015 ngexesha 1:01 pm • impendulo
Wanga uThixo angakusikelela u & usapho ur continously
kwi the best
PK • EtiMnga 24, 2015 ngexesha 3:08 pm • impendulo
Ndiyavuya ndiyifumene le post. Akwaba abantu kulwalamano ukutshatana kuboniswe them9 ngale ndlela xa kuthelekiswa kokubeka phantsi namanye amaqela abantu. Xa ndithetha inyani, uYehova sele usebenza entliziyweni yam xa kuziwa lo mbandela. Ndandidla Andikhathali kwaphela malunga nokuba ngubani umntu uthandana / utshate ukuze ukuthetha ngokobuhlanga. nokuba, wadibana nayo engafanele izibini ukutshatana kunye nentshukumo umfazi anti-omnyama yangoku wandishiya nokuva. Kodwa ndiyambulela uThixo ngenxa yesisa sakhe, ngokuba Yena nto nokubuyisela intliziyo yam kwaye kuvule amehlo am abone abantu umtshato indlela echanekileyo – kwanabo aveza zengqondo umdintsi kwimali uhlanga endingowakhe ukuba.
jony marvo • EyoMqungu 3, 2016 ngexesha 4:18 pm • impendulo
ufuna ungasithumela ekuboneni umfazi omhlophe ukuba uthanda kwaye nditshate ngokuba ngubani mna ukuba ngcono okanye imbi kuba iphupha lam
okanye • EyoMqungu 25, 2016 ngexesha 1:44 pm • impendulo
Eyona nto kufuneka ukuba buhlungu kakhulu .. I m ukusuka kwimpuma yehlabathi yaye kwam ndatshata intombi emhlophe.
ezinzima umahluko yayo cultrual.. Siqala umtshato.
doesnt usapho lwam ufuna kundihlangabeza kwaye Mna ndihlala apha naphaya kwintsapho yakhe.
Yena waye abafazi ogqibeleleyo I ube, siya umtshato ngenxa kwimiba exube..
Abazali bam abagulayo kwaye bafuna ukutyelela US kwaye nzima kuhlala umfazi wam. Mna intloko yekhaya ukuze ke kufuneka takecare intsapho yam backhome.
in lusizi, libhuqiwe khona ngoku neNMMU eyenzekayo layo ngoku uya thru mtshato .
Ndiya uthando kuye
Gift • EyoKwindla 5, 2016 ngexesha 1:59 pm • impendulo
Wowu. Unamandla kakhulu, Ukukhuthaza kwaye avule amehlo ethu abone ngaphaya ngamehlo ethu ngenxa abantu ababini UThixo ezibenza ukuba azalisekise injongo yakhe.
TheHonestTruth • EyoKwindla 27, 2016 ngexesha 1:15 pm • impendulo
Kulungile i ndiyindoda emhlophe Good kwaye i nangoku Ayikwazi ukuhlangabezana umfazi Good ukuzinza kunye ukusukela abafazi namhlanje kangaka ezahlukeneyo kakhulu elidlulileyo.
eric • UCanzibe 2, 2016 ngexesha 12:22 pm • impendulo
I ngokwenene unendaba ngaphantsi oko nobuhlanga umfazi wakho, kodwa Undimangalisile ukuva uyazise le (okanye nayiphi na) umba ngokuthobeka kwaye ngokulula. Enkosi Ofuna uThixo kuqala.
Brooke • Isilimela 4, 2016 ngexesha 5:06 pm • impendulo
Xa onke akhawunti ngamagama akungekhe kubekho truer, ukuba ulikholwa okanye akunjalo. I kufuneka ukuba siyigxininise indawo usebenzise ukuya ngqo,” Andizange kulunga, ngenene, into yohlanga umfazi wam ukuba, njengokuba ukhetho lokuqala ukuba ambone abamnyama.” njengabanye, Mna stuggled Elukholweni bam bafuna umsebenzi intando yakhe, kodwa mna ndiyakholwa nayo yonke into kum, ukuba Yena uya kuthumela iminqweno yentliziyo yam ( nje yokuzikhethela) ngokuba mna, Ndiyakholwa ukuba kulapho ngaphandle lomonde wam kunye / okanye Ukholo iyakhula. Njengoko pfumelelani na ibali yenu njengoko bubungqina wenu, Ndinale ngokulinganayo akhawunti ukuya nilindele oko kubonakala kungenakwenzeka kuba uyakunikhokela ngumnqweno, isidingo, nje ukuswela. Ukuze ube ngaphezu ngqo: Ndingathanda emzimbeni ukuba kwinkampani kaDavide Beckham, Chris Hemsworth, no Ben Affleck (xa eyodwa), kodwa ke akukho umnqweno atshate nabo; hayi xa intliziyo yam unqwenela ubuhle, amandla, uphawu, kunye nanobukroti umntu omnyama ngokubalulekileyo odalwe! Ukuba siye sahlala kwihlabathi esonweni, oku kuba mhlawumbi kukho inkxalabo enkulu, kodwa kwihlabathi ezifana umntu emihle eyenziwe iye ngamgangatho, bephoxekile, egxeka, nantlonelo, etc…I kwangaphambili akufuneki ukuba ukugqibezela uhambo lwam kunye naye ithunyelwe nguye. okokugqibela, ukwenzela mna, banikwa disconcerning imizekelo namhlanje xa umntu omnyama, Ndifuna kwaye kufuneka nyana wam, ukuba abone ukuba yintoni obefudula, (indoda elungileyo efana uyise yena phambi edlula) basengaba kwaye iya kuba kwakhona…….
Marwa • Isilimela 25, 2016 ngexesha 2:37 pm • impendulo
Kuyinto uvuyo olukhulu kunene nentsikelelo ebomini bam, i nomyeni wam kufuneka uqale engenabantwana for 8years ngoku ngenxa yokungakwazi bam azale kwaye igqiba ekubeni iingxaki zemihla ngemihla kwikhaya lam,ngoko i watyelela umhlobo nemazi eFlorida,weza necebo yokuqulunqa umntwana endingazange engqondweni,yaye ngoku i got akukho choice kunokuba isicelo umntwana kunye izimanga zam yonke into waya lula yaye namhlanje i ndonwabile kunye Hansom inkwenkwana(Wisdom)i ezithatyathwe kwiziko umntwana umntwana ilizwe Inter.
uMariya • Isilimela 28, 2016 ngexesha 10:22 mna • impendulo
Oku kundenza relief.That kakhulu yaba sisigqibo elungileyo ukwenza. Ngeke wazi xa umntu unelungelo iza around.No kungakhathaliseki uhlanga ndiya inamathele njengoko i American.That Afrika mna kusoloko kufuneka ukuba babe kummandla yam intuthuzelo ukuba ungaya le bhokisi. Ngokwenene ukwazisa le ngxelo wabanika . Wanga uThixo anisikelele wena nosapho lwakho kunye ezininzi iintsikelelo ezininzi ebomini bakho.
Andrew • EyeThupha 18, 2016 ngexesha 1:04 pm • impendulo
Iam Andrew uSamuweli
Marcus • EyoMsintsi 13, 2016 ngexesha 9:00 mna • impendulo
abantwana Great kuni nonke abathe utshatile nguThixo. Kufuneka angatshati abantu bazi ukuthanda ngayo kwaye athande ukuba! Le info yenzelwe daters kuphela–ukuba izibini ezitshatileyo; ukuze, ukuba utshate, uhlale utshatile, NDIYACELA! Ukuba uthandana nomntu othile, ke cela uThixo ade abaveze umele ukuba ukutshata–ngokuba awazi ngokunyanisekileyo! Abantu ingadlala mnandi-nice / kweentshembenxa kakuhle ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ubezé, abantu babe ngabantu abalungileyo(kodwa lowo elifanelekileyo indlela uThixo akupha sona–NOT UYEHOVA ehambelanayo–nokuba 2 abantwana kaThixo abe 2 iindlela ezahlukeneyo musa kukulayinisha phezulu; ukhumbule iivesi zeBhayibhile apho ndiyakholwa abafundi babakhalimela umfo wakwaThixo, ngenxa yokuba akazange ezinxulumene nazo ngqo; uYesu’ Impendulo ibonisa ukuba abantu babe lamaphulo eyamkelekileyo kuThixo, kodwa ube awahambisani; ke kwakhona, UThixo waxelela kuHoseya atshate ihenyukazi–ukuba imemori wam osebenza nam ngokuchanekileyo). Ngoko ke, ngokukhetha engafanele(ngamaxesha athile, ungumntwana kaThixo ibe embi kuwe), ungaziva ziintsikelelo ukuba ukuze zivezwe kuphela kulowo unelungelo. Kusenokwenzeka ndizizisele isiqalekiso kuwe; abantwana bakho sibe egula okanye abanye ukuze sife phambi kwakho; nawe kusenokwenzeka ukuba umzali kulungile ukuba umntwana; nibe ongachumiyo okanye engazaliyo ixesha elide; nithandane omnye komnye yaye into iseyi ukuba ekunene; nawe ukuze ufumane umntu oye iyakukhohlisa(kukho bathakathi, nakoosiyazi, bulu, Abaxhaphazi nobudlova, naggers akana-, cheaters, ascribers ukuvula ngesondo okanye LGBT zokuphila, abantu ezingazinzanga ngengqondo, ascribers ukuba okulala–abasebenzisa kuphela pet usapho njengesigqubuthelo, kubukho okanye akaziwa–abaye basebenzisa unqulo ukuba ninikwe phezu, amaxoki, i narcissistic okanye sibonisa ukuba ucingela, otywala drugheads, conpeople kunye nokufumana imali ngokungekho mthethweni, amaqaba / banqula uSathana, abantu amavila, kobuntwana–ophambene ethetha, kanjalo, Abaxhaphazi ngamazwi, cursers, abantu akasoze baguquke, ababulali serial, pedophiles / abantu njengombulo, etc. gaphandle phaya).
Wena cela kuThixo, Kuba unecebo kuwe ngenxa(ukuba umtshato ngenxa yaso nasiphi na isizathu) ukuba inkolelo wam onyanisekileyo ukuba bafanele ukuba aphinde atshate de iqabane lakho lofako(okanye ngesondo kwakhona abo ngeqhinga). Zibone awufanele ukufumana ixesha umtshato(ngaphandle ngokungathembeki ngokwesondo), kodwa kufuneka ngaphandle ngesondo okanye umtshato ukuba wenze ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Ngaba ungatsho ngokunyanisekileyo ukuba(ukuba ufumana eyoyikekayo iqabane kwaye awukwazi ukuthatha kuyo–kufuneka kwenzeke nokuba ke, kodwa yintoni eyona kuyenza) okanye iqabane lakho isizathu sokuba umtshato ukuba ungaya ngaphandle komshado kangangexesha ukuze aye ngaphandle oyinhloko lakho owabelana nalo ngesondo(eli thuba kungaba amashumi eminyaka)?! Yiyo lonto kufuneka ucele UTHIXO NGUBANI UMELE Marry! Ayisebenzisi isono kamva(ngenxa yokuba wena okanye nethamsanqa, kodwa yena uyazi) kunye uhambo lwakho yobuKristu yenziwe nkulu! Kuthekani ukuba uThixo akazange aphendule udaba lwakho bomtshato(kids, kakhulu) imithandazo–Uphelile uvuna oko ngoku kuhlwayelwa ngokukhetha ukutshata ngenxa yezizathu siqu kuphela?!
Marcus • EyoMsintsi 13, 2016 ngexesha 10:59 mna • impendulo
On enye indaba: kukho eminye imitshato(ngaphandle kokuba uyazi uThixo zityikitywe kubo–umcele ukuba uqiniseke; musa baqashele) ezingenakulinganiswa ukuba ucela inkathazo: 1. BMWF yimitshato America: siphila kwihlabathi ezimhlophe progressive, ubuhlanga injongo! racists White akalawuleki nocalucalulo ngaphezu naliphi iqela andizange ndiyibone! Kwaye umntu omnyama linani utshaba 1! Benza izinto ezilizothe ekutyeni kwakho, abamnyama kunye abantwana babo ukufumana ngokundanga ezingcolileyo / intsholongwane-eyayifakwe kunye nokuxhawulana, ikhombisa / iziqalekiso ukuze nimambathe umntu okanye abantwana bakhe, Amaphoyisa profile kakubi abantu abamnyama kude ngamandla kakhulu ukuba kukho umtshato BMWF eshunyayelwa njengoko kufanele ukuba, bayamphika usapho, bona “nepotize” amalungu ehlambulukileyo ekhaya emhlophe(kids, kakhulu) kwaye calula amalungu ingxubevange(kids) kunye nomntu omnyama, abandikrokrela zabo “izitha”, Bahlasela kunye / okanye ukubulala abantu abamnyama, ubudlelwane ezithile umzalwana / udade uya yekeyeke okanye inimical kwaye phantse zonke umzalwana white / udade-in-mithetho iya kuba akukho okanye ulwalamano inimical nogxa lwabo abamnyama, abafundisi kuvezwa villify, etc. Ngaba unokuyithelekelela mhlawumbi abantwana bakho ukuba akukho / nolwalamano cheap kunye neentsapho zabo koomama? e Christmas: yabantwana abamhlophe uthole $150 isipho esivela kulo lungu, kodwa abantwana bakho $25 isipho okanye akukho. Ngaba unokuyithelekelela ukuba into ethile yenzeke kwenye othandekayo wakho(umyeni okanye umntwana) bemangalisiwe ukuba usapho lwakho into yokwenza nalo nokuba nako ukubonisa? Uninzi lwezi zinto kungalindeleka; kodwa kwakhona, ezi zibini kufuneka ukumelana izinto abanye imitshato kufuneka ukuba bajongane, kakhulu! eYilwayo, ekhaya / ukunakekelwa impahla yasekhaya, iinkcitho ekhaya(maxa wambi ezingalindelekanga), ingxoxo kids(EZIZODWA kwaye ufuna ixesha elininzi kunomnye–ekhuthaza umntwana wakho ukuze uqonde ukuba abamhlophe ngokobuhlanga kubabona njengokuba emnyama kunye nokugcina ukulingana ukuba / uyayithanda abazali bobabini kunye bonke abantu efanayo ngokulandelelanayo), imisebenzi, ukuchitha ixesha nabahlobo bakho ukuze bahlale abahlobo bakho, etc. Kukho ntoni kangaka eyenza ungonwabi umtshato, ukuba uThixo akazange lokubeka kuyo!
2. Imitshato apho kukho umsantsa omkhulu-bulumko yonqulo okanye apho iingongoma eziphambili iimfundiso zonqulo esahlukileyo okanye ehambelanayo. cela nje ukumkani uSolomon. NamaKrestu. AbangamaKristu dha. AbangamaKristu ubuHindu. AbangamaKristu akekho. Christian ne Satanism(Illuminati, freemasonry, kunye nezinye amahlelo zabo namaqhina). Qiniseka ukuba uThixo ufuna khona phambi kokuba bangene, ngokuba uThixo angasebenzisa ukuba ukuguqula umntu okanye omnye umntu eluhambeni lwakho abaya kuphulaphula!
Brian • EtiMnga 28, 2016 ngexesha 6:25 mna • impendulo
isihloko Good, iye ngentlonipho wathetha emphefumlweni wam.
Wanga uThixo anisikelele wena kunye nosapho lwakho ngonaphakade kubomi obungunaphakade.
Joel • EyoMqungu 2, 2017 ngexesha 4:03 pm • impendulo
Oku Awesome kangaka. ndiyayithanda. inkosi ikusikelele.
mbah Joel • EyoMqungu 2, 2017 ngexesha 4:04 pm • impendulo
Oku Awesome kangaka. ndiyayithanda. uThixo
JoshuaKirkland • EyoMqungu 7, 2017 ngexesha 2:42 pm • impendulo
Ndiye ndinqwene drive yakho, ukuzimisela, ukuzimisela, & ukholo. Isibakala sokuba esi sifo une kukhathaza kuwe & wenza ubomi nzima ngani crazy ngokupheleleyo! nokuba, wena perserve & silwe kuwo wonke loo & ukuqhubeka ukugqiba izinto uThixo cela kuwe. Ndathi ndakuva ukuba Unashamed Tour of 2012 uhambo lokugqibela iqela lakho, engqondweni yam waqalisa ukuzibuza ukuba kungani na ukuba hang it up. Xa ndafumanisa ebeninawo ukudinwa yakho disorder & ukuba kwakho wayondele i internship wamadlelo, Ndaqalisa ukuqonda ukuba uThixo enye injongo kuwe. Xa kwakhululwa Vuka, Ndandinemincili soooo! indoda, Mna hype soooooo! Ukuba ndinixelela inyaniso, Ubomi Good yaba lamaKristu Hip-Hop album 1 ndaphulaphula & uthenge. Ukususela ngoko, Ndiye ndizame ukohlukana kwi umculo hip hop yokudumisa uYesu. umculo wakho uye waba nempembelelo kangaka ebomini bam. Ndiyathandaza ukuba uqhubeke ukulwa ngokusebenzisa nobunzima bakho uze igalelo ubukumkani! #116
nembali • EyoKwindla 8, 2017 ngexesha 3:10 pm • impendulo
ndaba emangalisayo. Ndiyavuya okanye. Ndinizekile mna ukuba yohlanga am, kodwa loo nto ayizange undisindisa bahlupha mna abahlala. Ndathi nje emtshatweni wam ukukhusela abantwana bam elizayo kunye UThixo uluthiyile uqhawulo-mtshato. Ndihlala kwisihogo ngethemba ukuya kwizibuko.
Achi • UCanzibe 7, 2017 ngexesha 5:57 pm • impendulo
Uthando yonke into…umbala into…
LaKiKI • UCanzibe 11, 2017 ngexesha 9:57 pm • impendulo
Ungubani na wena ezama ukwenza yakho oyikhethileyo? wena, okanye nathi? Ukuba wathatha umfazi wakho ngokwenene, ngenxa yokuba uYehova ayizukubakho eli nqaku. Awunayo imvume. Ewe, Mna ukuba kukho ukudla kwabafazi Black UThixo ukuba kanye njengokuba emangalisayo njengoko umfazi uye wakhetha. Kodwa akazange afune ukuba, okanye ezinomdla. umnqweno wakho umfazi wakho. Oku kuhle. ume nje ukuzama ukuzithethelela kuyo, njengoko engenangqondo uyazehlisa.
UNdinguye bengachani kuphela ithi Ukumela isimo sakho athunyelwe, kodwa ndiya uzame kwakhona. izinto intetho Free!
James • EyoMqungu 23, 2018 ngexesha 1:46 pm • impendulo
WOW REALLY. Kufuneka siye kuThixo ukufumana igama. I dont Ndicinga ukuba uyayazi into oyithethayo isizathu oliphosileyo ngokucacileyo ingongoma. Im ucinga dont kuqonda injongo ngaye ukwenza oku ukuze ancede aze akhuthaze abanye nemeko efanayo. Indlela sehla iyalila kwayo ingqumbo okanye ukungazi okanye mhlawumbi nokuba prejudence ngokwayo kuba ucinga ukuba uzama ukuba ndiyilahle izizwe nazo yena umfazi abamhlophe thats akunjalo. Oku kuvakala ngathi uyahlanya yena ixesha intombazana emhlophe.
Tiffany • Isilimela 27, 2017 ngexesha 5:55 mna • impendulo
Yintoni up Uhambo. Lena yi Tee. I ewuthanda eli nqaku. Nangona mna iminyaka emva. Hleka kakhulu. Kodwa iqiniso kukho isizathu mna ndibona nje lo. Umyeni wam iqaqambile, nam wakhula nombono ngokwam umntu omnyama. Kodwa uThixo wadala ukuba ibe nomahluko. Ngalima up Mna itakane opholileyo kwi ibhloko, yaziwa njengenye fellas. Emva koko kholeji utshintsho fellas isihloko xa yayicinga ukuba cute. Kodwa ke ngenxa yokuba Ndingu igosa owawuza nzima ukuba umntu omnyama ukuxhasa me ku. Ndawuthenga ke kusikelelwa kwi 30. 3 iminyaka obomeleleyo intombazana encinane entle. I nje thandaza ihlabathi ndawonye kwaye silwazile uthando akukho umbala. Inkosi ikusikelele
P.S. umzalwana nomfazi wam Lil i Asia, utshatile 9 kwiminyaka. Umama wam usibizela imbiza yakhe yokunyibilikisa uthando.
'S PTJI MJI MANAMBO • EyeKhala 16, 2017 ngexesha 7:59 mna • impendulo
Wena usikelelweyo ME.
Millz • EyeThupha 5, 2017 ngexesha 10:35 mna • impendulo
Bobabini mna nomfazi wam yaye baqonde incoko ezifana siziva ezi ntlobo namabali njengoko “touchy” njengoko ke kufuneka ukuba kujongwane kuluntu lwethu yaye okubaluleke njengamaKristu. Mna ndiyindoda abamnyama ngokwam, umfazi wam, omhlophe, ngunyaka esixhenxe abancinane kunam. Sobabini uthando uKristu ngokunzulu. Njengoko sikholelwa ngokwenene ukuba ngayo imithandazo uKristu wasinika omnye. Ngoku ke abazali babantwana abane ezintle kwintsapho ezixutyiweyo. Le manyano uThixo wadala ukuba kuthi ngokuqinisekileyo andizanga izithintelo zalo silahlekelwe abahlobo kunye nosapho endleleni ukuba kusekho sithandazela. Inyaniso kukuba icebo likaThixo kuthi nanini into sasizimisele. Kwaye ke bible swi-ngokupheleleyo nemiyilo ukuba ukuthetha lethu icebo likaThixo kunye nemfezeko Lwakhe laphezulu. (Hoseya / uGomere i umzekelo ogqibeleleyo)
Ndicinga umbono lehlabathi semibutho ukutshatana kuye koniwa ukuba yimbumba ucalucalulo, intiyo, Zininzi ezinye izinto ezimbi kwaye ububi ezithwaxe iingcamango uluntu ukususela ekuqaleni yethu. It Naso isizathu sokuba bible leyo indaba enkulu uthando kubo bonke nangoku siyohlala naphezu kwayo yonke le millennias.
nomfazi wam yaye ndiye ndafumana le ntiyo kuqala-isandla ukusuka iinkcubeko zethu kunye nabanye eyethu. Yinto nokuba ezinomdla kakhulu xa ivela ngumntu lowo ubanga ukuba bangamaKristu okanye abo ukuqhubekekiswa ukungazi yabo. Xa ezi zinto zisenzeka kuthi siyibona njengento yintsikelelo kuba sibona nje ukuba ukufutshane kangakanani na ukuva ilizwi likaThixo nathi kungekhona eyethu. Yena (uKrestu) e kanye Ngaloo mathuba esithwaxa namaGalati 2:20, ke ngoko siyabona ekulweni thina sifuna ukuba akukho okwethu ukuba alwe. Ngaba kwenza kube lula ukuva ukuba? Hayi akunjalo, aveza kuphela imibuzo efana: “Kulungile, Andikwazi ukulwa, kodwa yintoni abantwana bam? Njani ukukhusela kuwo ukusuka intiyo babone?
Loko u xiya leswaku umtshato wakho nje kuphela lobuqu, uhambo emzimbeni kodwa enye yokomoya.
nomfazi wam kunyaka wethu yesithoba ngomtshato (ukufaka ihlombe) kwaye asilithobelanga bomelele ngakumbi nomanyene ngakumbi kuba sibona mission yethu ngoku, oko akuyi kuba njalo kakhulu zicace ngakumbi. Xa iBhayibhile ithi thina nilukhanyiselo lwehlabathi, ngokwenene! Kwaye abanye baqonde ukuba, kodwa ke wena ufumane abambalwa abathi bona ngokwabo: “yeah! Yintoni ezimbini na ndifuna ukuba!”
Kumzalwana wam Trip kunye nentsapho yakhe emangalisayo kunye nosapho eyandisiweyo Nditsho lo,
uhambo lwakho kuqala umzalwana wam kunye nodade . Yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwakhe. Yena uya kunikhokelela elide kangaka nje soze uyeke ukusebenza kuye.
Kuya kubakho imiqobo emininzi Ndiyazi ngokunyanisekileyo, ukuba mhlawumbi sele ulufumene kubo abahlala eMzantsi. Kodwa wena umzekelo ubuhle oluyinene lukaThixo wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu. Xa uthando umtshato oku kubonisa kakuhle, kuba iBhayibhile ithi amaxesha multiple ukuba “Kuba kuThixo akukho kukhetha lomntu noThixo” – KwabaseRoma 2:11
UThixo anisikelele nabo bonke abanye kule post ngubani igama negama likaYesu Krestu
Achi • EyoMsintsi 22, 2017 ngexesha 11:55 mna • impendulo
Ndiyenze Godwilling okufanayo
Dawnn • EyoMsintsi 22, 2017 ngexesha 3:16 pm • impendulo
bro, Ndiyayibulela kwaye uhloniphe kule posi ukuze. Ndakhe ndeva isabelo zam azilungelelene na izizathu zokuba abantu abamnyama atshate namabhinqa bolunye uhlanga / ngokobuhlanga ezahlukeneyo. Esi sesinye sezihlandlo ezimbalwa Ndakhe ndeva brotha’ ukuveza ukubaluleka Lobuthixo zobumnini phezu ukuthelekiswa kutheni abafazi yohlanga omnye zingcono ngaphezu kwabantu basetyhini abakule olunye uhlanga. Kwaye ngokwenene na ngenjongo Kingdom phezu kukhetha. Ngamana uThixo wethu qhubeka ukuba anisikelele, nomkakho kunye nosapho!
Trinitee Hudson • EyeDwarha 20, 2017 ngexesha 12:29 mna • impendulo
Umntakwethu kuKristu. I am so blessed eli nqaku. Siyabulela ngokuvumela ilizwi ukufundisa kunye ukulungisa imiba abantu baqonde ukuba.
Mna bakhuthazwa ukuzimisela kwakho emtshatweni wakho kodwa enyanisweni yakho nibalungiselela. UThixo akusikelele wena nosapho lwakho.
Joshua IFORDHAM • EyoMqungu 6, 2018 ngexesha 3:03 pm • impendulo
Andazi ukuba eli nqaku kwakufuneka. Andizange ndiyibone iqela labantu uziva imfuneko ukuzithethelela umnqweno wokutshata mhlophe ndibone abantu abamnyama abantu ingakumbi abamnyama. Ndaphawula ukuba abantu abamnyama abathandanayo kwaye atshate amaqela non emhlophe musa ukuzithethelela kutheni batshata loo mntu non amhlophe. Ukuba benza, akawuthobelanga ngomlinganiselo abantu abamnyama abaya kuzeka abamhlophe.
Mna nje ixesha kunzima ukukholelwa ukuba bonke abo iintlanga kwabafazi kweso sikolo ukuba ukukhonza uThixo onothando kuye ngokupheleleyo zange ukubamba iliso lakho kodwa intombi emhlophe, umfazi oye kuthiwa Interface umntu omnyama xa, ubanjwe iliso lakho umtshato. Ufuna nje ukutshata abamhlophe yaye uzama ukuzisa uThixo koko njengendlela kubonakala ngathi yonke le nto ngoko uThixo ngenxa engaphambili xa le yokuziphatha ngaphambi ubukhoboka.
Ukuba ufuna ukuthandana emhlophe kulungile kodwa ukuba ubhale inqaku kuthetha kukho into azinze emoyeni wenu.
Amen • EyoMqungu 10, 2018 ngexesha 1:04 pm • impendulo
Akumangalisi kutheni abafazi abaninzi abamnyama pissed le mihla.
Joshua Storm • EyoMdumba 3, 2018 ngexesha 1:50 mna • impendulo
Ndiyavumelana nawe, Trip Lee. Ndiye ukwazi ukuba umntu lonke yenziwa umoya, umphefumlo, nomzimba. Ngoko ke thina izidalwa zomoya ukuba, beyimiphefumlo, kwaye siphila emzimbeni. Kulilishwa kakhulu ukuba abantu abaninzi khangela “indlu” kodwa into ebalulekileyo ngumoya / intliziyo yomntu. Ndingathanda uthando nje ukuphinda-ukugxininisa ukuba umntu phandle ukufunda comment yam apha. Umntu ungumoya-ntle. Yena unomphefumlo (iimvakalelo neengcinga) yaye uhlala umzimba wenyama.
Ukuba ulusu ezimhlophe okanye ezimnyama ukuba abantu abaninzi basoloko ngokukhawuleza ukuchonga nje indlu sihlala kuyo. Mine omnyama, mhlawumbi okwakho omnyama. Ukuchaza abantu ibala labo “indlu” kufana nigweba imixholo ileta evela look of emvulophini. Isizathu sokuba bathi “umzimba wakhe walala abanye” kungenxa yokuba umzimba wakho, kodwa kunokuba uhlala kuyo. Ukuba sonke noku ezi nyaniso, kwakungayi kuba kukho nayiphi na imiba uhlanga okanye umbala. UThixo ucinga ngobuchule, wayesazi ukuba le umhlaba ngelaphu yakhe, yaye ayisoze ulipeyinte bonke abamhlophe, okanye wonke omnyama. Ubuhle lwezobugcisa kwi kuxubana imibala, hayi nje elinye. Yiloo nto kanye kutheni sifanele ukuba ukubhiyozela omnye komnye ngayo uhlanga endaweni ranting ngomahluko zethu. A ikeyiki iqulethe imali elungileyo zezithako eziliqela kuquka amaqanda, ityuwa, sugar, etc. Xa enziwe kunye wapheka, sifumana ikeyiki elungileyo ukuphuma kuloo. Zama ukuba ityuwa, sugar, namafutha, kunye namaqanda emlonyeni wakho phambi ukubhaka kwaye mhlawumbi nigabhe guts yakho ngaphandle!
Ngoko ke ingaba umkakho / umyeni wakho yellow, mhlophe, oluhlaza, okanye nantoni na into ingxoxo ezixabisa. Ingongoma kukuba ingaba y'all ukufumana uqhagamshelwano ukuba y'all ocinga ukuba kubalulekile ukugcina bonke ubomi bakho. period. I ngokunyanisekileyo Ndicinga ukuba abantu calu-calula kwi ngenxa yohlanga bancinci ephangaleleyo, kwaye abakwazi ukubona umntu wonke (umoya, umphefumlo nomzimba).
Biota Macdonald • UCanzibe 14, 2018 ngexesha 10:34 pm • impendulo
Uthando ukuba wabhala le! Ndiye an ukutshatana ngokwam, nangeendlela ezininzi ndakwazi ukubalisa a lot of oko ekwabelwana.
Triola Dulaney-Ndiaye • EyeThupha 20, 2018 ngexesha 12:54 mna • impendulo
Abantu nezimvo zabo! Nina guys kuhlala ephila uThixo! Wena ube nentsapho elihle!
RealityCheck • EyoMsintsi 8, 2018 ngexesha 7:41 mna • impendulo
Wowu, i am amhlophe yaye andikwazi ahlangana ehloniphekile umfazi omhlophe eziqhelekileyo namhlanje.
Verena • EyoMsintsi 9, 2018 ngexesha 7:00 mna • impendulo
Okokuqala oof bonke Ι ufuna sayy blog enkulu! yaye
nombuzo quicқ endiya ndingathanda ukubuza ukuba үou
sukhathalela. Ndaba curio ᥙ ѕ ukufumana hоw na ingcebiso yourѕelf nesicacileyo pгior yeengcinga ekubhaleni.
I һave saba ixesha elinzima evulekile thoughfs yam ukuphuma iingcinga zam.
I ngokwenene ndiyathanda writіng nangona kunjalo nje kubonakala ngathi tһe firet 10 kakhulu 15 imizuzu lethu ᥙ juist ngoko- ezilahlekileyo ezama veka ց urfe outt ukuqalisa indlela. Naziphi na izimvo okanye namacebo?
Khankanya: Abasetyhini Kuba Trump And The Men Black abayithanda – ukutshatana
uJill • EyoMdumba 10, 2019 ngexesha 7:36 mna • impendulo
Soloko usebenzise isizathu ku hlamusela into uyenze.
erma • UCanzibe 2, 2019 ngexesha 12:48 pm • impendulo
Abantu abaninzi kufuneka leyo into ethile kubo, okanye nje
into engaqhelekanga okanye ezizodwa.
ummeli mtshato • Isilimela 19, 2019 ngexesha 1:59 mna • impendulo
Ungakhathazeka ukuba wayecaphula embalwa zezithuba zakho, yonke imihla
Mna eyam imali kunye nemithombo emva site lakho?
blog yam kwindawo eyiyo enye umdla nezakho kunye neendwendwe zam
kuba yingenelo ngokwenene ukusuka ezininzi ulwazi obabonisa apha.
Nceda undazise ukuba oku kulungile kunye nawe. Enkosi!
zobufazi • EyeThupha 2, 2019 ngexesha 3:14 pm • impendulo
Ꮃ â, lo аrticle limnandi, udadewethu lihlaziya ezifana
izinto, oko ndiya goіng ukwazisa һer.